ကိုပေါက်ရဲ့မှတ်စုလေးများ..: April 2010
လူငယ်ထု အတွင်းမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ နတ်ဒေ၀ီလေး (သို့)့ Ecstacy
မူးယစ်ဆေး ရောင်းနေတယ်လို့တော့ မထင်ပါနဲ့ဗျာ ဒီနေ့ လူငယ်ထု အတွင်းမှာ ရေပန်းအစားဆုံး နတ်ဒေ၀ီလေး တစ်ပါးအကြောင်း ပြောပြချင်လို့ပါ။ သူ့နာမည်ကတော့ Ecstacyတဲ့။ ဒီနေ့မှာတော့ လူငယ်လူရွယ် ဆင်းရဲမရွေး ချမ်းသာမရွေး သူ့ကို ချစ်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ မြန်မာပြည်မှာတော့ သူ့ကို အီး(န)လို့ ခေါ်ကြ ပါတယ်။ ခေါင်းလှုပ်ဆေး လို့လည်း ခေါ်ကြပါတယ်။သူကို ခု ကျွန်တော်နေထိုင်နေတဲ့ မလေးရှားနိုင်ငံမှာတော့ စိတ်ကြွမူးယစ်ဆေးလို့ကို မယူဆတော့ဘူး။သူတို့အတွက် ဒီဆေးဟာ နိုက်ကလပ်တွေ၊ဒစ်စကိုကလပ်တွေမှာ လူတိုင်းသုံးစွဲနေကြတဲ့ အရာတစ်ခုလို ဖြစ်နေတယ်။
ဒီလိုစိတ်ကြွ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေဟာ မြန်မာပြည်ကို ၁၉၉၀ ပြည့်နှစ်တွေမှစပြီးတော့နယ်စပ်ဒေသတွေကနေ မန္တလေးကို စ၀င်လာပါတယ်။အဲဒီအချိန်တုန်းက ဗမာပြည်အောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာ ဒီလို စိတ်ကြွ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေ ခေတ်မစားသေးပါဘူး။အဲဒီအချိန်လောက်တုန်းကဆိုရင် အောက်မြန်မာပြည်မှာ ခေတ်အစားဆုံးကတော့ ဘိန်းအခြေခံ မူးယစ်ဆေးဝါးတွေပဲ။ဘိန်းဖြူ၊ ဘိန်းမဲ၊ ဆေးခြောက် ဒီလောက်ပဲ။ ကိုကင်းတောင် သိပ်မသုံးကြပါဘူး။မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းမှာတော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ စိတ်ကြွမူးယစ်ဆေးကိုသုံးစွဲနေကြပါပြီ။
၂၀၀၀ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာတော့ မြန်မာပြည်အောက်ပိုင်းကို စိတ်ကြွဆေးတွေ သိသိသာသာစတင်ဝင်ရောက်လာပါတယ်။စသုံးတာကတော့ မြန်မာပြည်ရဲ့ ရေပေါ်ဆီ အထက်တန်းလွှာက လူငယ်ထု ပြီးတော့ ငွေကြေးကို လွယ်လွယ်ကူကူရတဲ့ အနုပညာရှင်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟိုးအရင်ကတည်းက ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒီအဆိုတော်တော့ နံပါတ်ဖိုးနဲ့ လျှောသွားပြန်ပြီ ဟိုသရုပ်ဆောင်တော့ ဆေးစွဲနေပြီ စတဲ့ သတင်းတွေ ကြားရပါတယ်။ ခုလည်းကြားနေရတုန်းပဲ ရှိနေတုန်းပဲ။ သူတို့ ဘာကြောင့် ဒီမူးယစ်ဆေးကို စွဲသွားကြလဲ... ဒီမူးယစ်ဆေးကြောင့် သေဆုံးကြရသလဲဆိုတာကိုကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တွေ လေ့လာ ကြည့်တော့ ငွေကြေးကို လွယ်လွယ်ရလို့ဆိုတာ သွားတွေ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျွန်တော်က ပြောတာပါ။
မြန်မာပြည်မှာတင် မဟုတ်ပါဘူး၊ တကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ အနုပညာရှင်တွေဟာ မူးယစ်ဆေးကို တနည်းနည်းနဲ့ စွဲသွားတတ်ကြပါတယ်။စသုံးတာက အထက်တန်းလွှာလူငယ်ထု ပြီးတော့ အနုပညာရှင် တွေ။ ဘယ်နေရာမှာ သုံးလဲဆိုတော့ ပါတီပွဲတွေ၊ နိုက်ကလပ်တွေမြန်မာပြည်မှာ ဒီနိုင်ငံမှာလို ဒစ်စကိုကလပ်ဆိုတာတွေ ခုထက်ထိ မရှိသေးပါဘူး။ခုရန်ကုန်မှာခေါ်နေတဲ့ ဒစ်စကို ဆိုတဲ့ နေရာတွေဟာ တကယ့် ဒစ်စကို အဆင့်အတန်းကို မမှီပါဘူး။အဲဒီတော့ဗျာ ဒီလိုနေရာတွေမှာ ဒီလိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ နတ်ဒေ၀ီလေးကို မချစ်မနှစ်သက်တဲ့သူ ဘယ်သူရှိမလဲဗျာ။
တကယ်လို့များ ခင်ဗျားတို့ ဒီလို နတ်ဒေ၀ီလေးနဲ့တစ်ခါလောက်ကြုံဖူးသွားရင် မစွဲလန်းပါဘူးလို့ ပြောရဲမလား ကျွန်တော်တော့ မပြောရဲဘူးဗျ။ဘာဖြစ်လို့ မပြောရဲလဲဆိုတာတော့ မပြောတော့ဘူးဗျာ။ သိတယ်မဟုတ်လား ဟဲ..........ဟဲ။ ခုတော့ ဒီဆေး Ecstacy ကို ရန်ကုန်မြို့မှာ ပေါပေါလောလော ရနိုင်နေပါပြီ။ပေါပေါလောလောဆိုလို့ ငါတို့လည်း စမ်းသုံးကြည့်ရအောင်လို့များ မစဉ်းစားလိုက်ပါနဲ့ ခုလောလောဆယ် ရန်ကုန်မှာ အီး တစ်လုံးရဲ့ကာလပေါက်ဈေးဟာ ထုတ်လုပ်တဲ့ နိုင်ငံကို လိုက်ပြီးတော့ မြန်မာငွေ ၆သောင်းခွဲကနေ ၁သိန်း ၃သောင်းဝန်းကျင်ရှိပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ ၀ယ်ချင်တိုင်း ၀ယ်လို့မရဗျ။
Ecstacy စိတ်ကြွမူးယစ်ဆေးလုံးပုံစံတွေကတော့ အပေါ်ကပုံမှာ တွေ့ရတဲ့ အတိုင်းပဲ မသိရင် အကိုက်အခဲပျောက်ဆေးလေးတွေ အတိုင်းပဲ ဒါပေမယ် တွေ့ဖူးရင် သူက သိသာပါတယ်။ ပုံမှန်ဆေးတွေက ဆေးလုံး နည်းနည်းပါးတယ်ဗျ၊ သူကတော့ ထူတယ် ထူတာမှ သိသိသာသာကိုထူတယ်။သူ့ရဲ့ ဓာတုဗေဒဖွဲ့စည်းပုံက 3-4 methylenedioxy- methamphetamine ဖြစ်ပါတယ်။ ဦးနှောက်ကိုပျက်စီးစေတဲ့ အခြားဆေးဝါးများနဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံဆင်တူပါတယ်။
အဲဒီ ဓါတုဗေဒပစ္စည်းတွေကို အဆင့်မြင့်ဓါတ်ခွဲခန်းကြီးတွေမှာ အသေအချာ ဓါတ်ခွဲပြီးတော့ သူတို့မှာပါတဲ့ မော်လီကျူးတွေကို ပုံဆောင်ခဲအဖြစ် ပုံပြောင်းပါတယ်။ပြီးတော့မှ ဆေးလုံးရိုက်တဲ့ စက်ထဲကိုထည့်ပြီးတော့ ဆေးလုံးရိုက်တာပါ။ ဒီဆေးကို ၁၉၈၀ပြည့်နှစ်လောက်မှာ အနောက်နိုင်ငံတွေက နိုက်ကလပ်တွေမှာ စသုံးပါတယ်။
သူ့ကို ထုတ်လုပ်တဲ့ နိုင်ငံတွေကတော့ ဂျာမနီ၊အင်္ဂလန်၊ဟော်လန်၊အမေရိကန်စတဲ့ နိုင်ငံတွေပါပါတယ်။
ခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ အာရှဖက်ကို ဒီစိတ်ကြွဆေး ထုတ်လုပ်တဲ့ ဖော်မြူလာ ရောက်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အာရှနိုင်ငံ တော်တော်များများက ဒီဖော်မြူလာကို မရကြတာများပါတယ်။တရုတ်၊ယိုးဒယား၊မလေးရှား၊ဖိလစ်ပိုင် အစရှိတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာတော့ ဥရောပနဲ့ အမေရိကန်နိုင်ငံ ကလာတဲ့ ဆေးပြားတွေကို ချေပြီးတော့ ပြန်လုပ်ကြပါတယ်။
ဥပမာဗျာ ဟော်လန်တစ်ပြားကို ဒီမှာ ၅လုံးရအောင် ပြန်လုပ်ပါတယ်။ ဟော်လန်ထုတ်တစ်ပြားရဲ့ အာနိသင်ဟာ လူ၃ယောက်စာ သုံးစွဲလို့ရပါတယ်။ဒါပေမယ့် ဒီမှာကျတော့ အဲဒီ ဟော်လန် တစ်ပြားတည်းကို ချေပြီးတော့ ၅လုံးရအောင် ပွားယူလိုက်တော့လူတစ်ယောက်ကို ၂လုံးသောက်ရတာတို့ ဒီထက်ပို သောက်ရတာတို့ ဖြစ်လာပါတယ်။ဒီတော့ ရေရှည်မှာ ဟော်လန်တို့ အမေရိကန်တို့ကလာတဲ့ ဆေးထက် ဒီမှာထုတ်တဲ့ ဆေးတွေက ပိုပြီးတော့ ခန္ဓာကိုယ်ကို ပျက်စီးမြန်စေပါတယ်။
မြန်မာပြည်ကို ၀င်နေတဲ့ Estacy ကတော့ တရုတ်၊ ယိုးဒယား၊ မလေးရှားနဲ့ အင်ဒိုနီးရှားတို့ကနေ ၀င်ပါတယ်။ခုလောလောဆယ်မှာတော့ ယိုးဒယားဆေးနဲ့ မလေးရှားဆေးက အကောင်းဆုံးလို့ သိရပါတယ်။ ဆေးတွေမှာ တံဆိပ်ပေါင်းစုံ ရိုက်ထားတယ်။ဒီမှာဆိုရင် ငါးမန်းတံဆိပ်နဲ့သရဖူတံဆိပ်ဟာ ကောင်းတယ်။ မြန်မာပြည်မှာတော့ ဘယ်တံဆိပ်တွေ ၀င်နေလဲ မသိရဘူးဗျ။ Ecstacyရဲ့သဘာဝတွေကတော့ ဆေးပြားတွေကို စသောက်သောက်ချင်း အင်မတန်မှကို ခါးသက်ပါတယ်။ ဒီတော့ သူ့ကို coke ဒါမှမဟုတ်ရင် beer နဲ့ရောသောက်ရပါတယ်။ သောက်ပုံသောက်နည်းက Ecstacy ဆေးပြားကို ကျေညက်အောင် ၀ါးစားလိုက်ရပါတယ်။ တချို့ကတော့ ဆေးများသောက်သလို မျိုချပစ်ပါတယ်။အများစုကတော့ ၀ါးစားကြတာပါ။ ပြီးရင် coke သောက်ချလိုက်ပါတယ်။ ဒါမှလည်း လျှာပေါ်မှာ စွဲပြီးတော့ ကျန်ရစ်ခဲ့တဲ့ ခါးသက်သက်အရသာကို ဖျောက်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဆေးသောက်ပြီးပြီးချင်း မူးယစ်ဆေး အာနိသင် မပြပါဘူး။ လူရဲ့ ဆေးသောက်ပုံသောက်နည်း၊ ပြီးတော့ အစာအိမ်ထဲရှိ သွေးကြောတွေကနေ မူးယစ်ဆေးကို စုပ်ယူနိုင်စွမ်း၊ မူးယစ်ဆေး သုံးစွဲမှုနှုန်းတို့ အပေါ်မူတည်ပြီးတော့ အချိန် နာရီဝက်ကနေ လေးဆယ့်ငါးမိနစ်လောက် စောင့်ရပါတယ်။
သဘောကတော့ဗျာ ဒီမူးယစ်ဆေးကို သုံးစွဲတော့မယ်ဆိုရင် ပထမ အစားသိပ်စားမထားရပါဘူး (အစာ အ၀စားထားရင် ပြန်ပြီးတော့ အန်တတ်ပါတယ်)၊နောက်တစ်ခု ဆေးစွမ်း မြန်မြန်ပြစေချင်ရင် တစ်ခါတည်း ဆေး ၂လုံးလောက် ဆင့်သောက်တာမျိုးတို့ကို ပြောတာပါ။တချိုကျတော့ ပါးစောင်မှာ လျှာပွတ်ဆေးများ စားသလို လှိမ့်ပြီးတော့ စားကြပါတယ်။
မှတ်ချက်။ ။ခုမှဆေးသုံးစွဲမဲ့သူတွေဟာ တစ်ခါတည်း ဘယ်တော့မှ ဆေးတစ်လုံးလုံး မသောက်ရဘူး။တခြမ်းချင်းစီ သောက်ရပါတယ်။တစ်ခါတည်း ဆေးတစ်လုံးလုံး သောက်လိုက်ရင် ဆေးအာနိသင်ကို မခံနိုင်ပဲ အရက်များ အဆမတန်မူးသလို ခံစားရပြီးတော့ လဲကျသွားတတ်ပါတယ်။
နာရီဝက်လောက်နေရင် မူးယစ်ဆေးရဲ့ အစွမ်းပြလာပါလိမ့်မယ်။ ပထမ လေတွေဆန်တက်ပါလိမ့်မယ်။
carbonated soft drink တွေသောက်လိုက်ရင် လေတက်သလို တက်လာပါတယ်။ အစားများများ စားထားတဲ့ သူတွေဆိုရင် ပြန်အန်ပါတယ်။
လေတက်တာတို့ အန်တာတို့ ဖြစ်ပြီးရင်တော့ မူးယစ်ဆေးအာနိသင် စပြပါပြီ။ ဆေးအာနိသင်ပြပြီဆိုတာနဲ့ စိတ်ထဲမှာ အရင်ဆုံး ပျော်လာပါလိမ့်မယ်။အလိုလိုကို ပျော်လာတာ။ ပြီးရင်တော့ နိုက်ကလပ်တို့၊ ဒစ်စကိုတို့က နှလုံးမခံနိုင်လောက်အောင်၊ နားမခံနိုင်လောက်အောင် ဖွင့်ပေးတဲ့ သီချင်းသံ ပြင်းပြင်း သွက်သွက်နောက်ကိုခင်ဗျားတို့ စိတ်တွေက လိုက်သွားလိမ့်မယ်။ အဲဒီအခါ ခင်ဗျားတို့ခေါင်းတွေက ဒီဂျေက တီးပေးတဲ့ တီးလုံးသံနောက်ကို စီးချက် ကျကျ လိုက်ခါ လိမ့်မယ်ဗျ။
တကယ်တန်းကျတော့ ဒီမူးယစ်ဆေး သဘာဝကိုက တေးသံကို အင်မတန်မှကို ကြိုက်ပါတယ်။
ဘယ်လို တေးသံမျိုး လဲဆိုရင် အင်မတန်ဆူညံပြီးတော့ နှလုံးကို အင်မတန် ခုန်စေလောက်တဲ့အထိ ပြင်းထန်တဲ့ တေးသံမျိုး၊ပြီးတော့ နားစည်ပေါက်ထွက်သွားအောင်ကို အဆမတန် ချဲ့ကားထား တဲ့ တီးလုံးသံ သွက်သွက်လက်လက်ကို တောင်းဆိုပါတယ်။ သဘောကတော့ဗျာခင်ဗျား အိမ်မှာ ခင်ဗျား Estacyတစ်လုံးသောက်ပြီးတော့ ဘိန်းမှိန်းသလို မှိန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ ခင်ဗျားအတွက် မူးယစ်ဆေးရဲ့ အရသာကို ခံစားရမှာမဟုတ်ဘူး။ခုဏကကျွန်တော် ပြောသလို မူးယစ်ဆေး အရသာကို ခံစားနိုင်အောင် နိုက်ကလပ်တို့၊ ဒစ်စကိုတို့ကို သွားရပါတယ်။
အဲဒီနေရာတွေရောက်ရင် အဲဒီနေရာတွေက ဖွင့်ပေးတဲ့ တေးသွားတွေကို နားထောင်ရင်းနဲ့ မူးယစ်ဆေးသုံးစွဲရင်းနဲ့ တဖြည်းဖြည်း ခေါင်းကလေး လှုပ်ခိုင်းလိုက်၊ခြေကလေး လှုပ်ခိုင်းလိုက်၊ လက်ကလေး ခါခိုင်းလိုက်နဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့နတ်ဒေ၀ီလေးက သူ့ရဲ့ အစွမ်းကို ထုတ်ဖော်ပြပါလိမ့်မယ်။
ဆေးအာနိသင် ဟာ ၆နာရီကနေ ၁၀နာရီကြာအောင် ပြပါတယ်။ဒီမူးယစ်ဆေးရဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံကတော့ အစာအိမ် သွေးကြောများ၊ ပါးစောင်သွေးကြောများကနေ မူးယစ်ဆေးကို စုပ်ယူပြီးပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက် ဦးနှောက်ကို ပို့ပါတယ်။တချို့သော မူးယစ်ဆေးအပိုင်းအစတွေဟာ ဦးနှောက်မှာရှိတဲ့ လူကိုပျော်ရွှင်စေတဲ့ ဂလင်းတွေကို အဆမတန်လုပ်ခိုင်းပါတယ်။
ဒါကြောင့် လူဟာ အလိုလိုနေရင်းကကို ပျော်လာပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ အစားစာချင်စိတ်ကို ဖြစ်ပေါ်စေတဲ့ သည်းခြေရည်ထုတ်ဂလင်းတွေကို ဖြတ်တောက်လိုက်ပါတယ်။ဒီတော့ လူဟာ ဒီတီးလုံးသံနောက်လိုက်ရင်းကနေ ပျော်နေတယ်။ ပြီးတော့ အင်တိုက်အားတိုက် ကပါတော့တယ်။
တချို့ကျတော့လည်း သိပ်မကဘူး ခေါင်းလေးကို ဘယ်ဖက်ရမ်းလိုက် ညာဖက်ရမ်းလိုက် ဒီဂျေကဖွင့်ပေးတဲ့ သီချင်းလေးကို လိုက်ဆိုလိုက် လုပ်ကြပါတယ်။
ဒါကြောင့် ဒီမှာ ရှိတဲ့ မြန်မာ အသိုင်းအ၀ိုင်းကတော့ ဒီဆေးကို ခေါင်းလှုပ်ဆေးလို့ ခေါ်ကြတာပါ။
သူက ဆေးစွမ်းပြ နေချိန်မှာဆိုရင် အဲလို ခေါင်းကို ဘယ်ညာရမ်းရတာ အင်မတန်ကို အရသာရှိပါတယ်။
ခေါင်းထဲကနေ ဘာမှန်းမသိတဲ့ ခံစားချက်တစ်မျိုးကို ထုတ်ပေးနေသလိုကို ခံစားရတယ်။ခေါင်းရမ်းရတာကိုပဲ ရပ်လိုက်ရင် ချက်ချင်းကြီးပဲ ကိုယ့်လွတ်လပ်မှုတွေ ဆုံးရှုံးသွားရသလိုလို၊ တစ်စုံတစ်ခုကို ဆုံးရှုံးသွားရသလိုလို ခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်ခေါင်းကို တရားလွန်အောင် လှုပ်တော့တာပါပဲ။ (တချို့ဆို လေထဲမှာ လွင့်နေတယ်ဆိုပဲ။ ဤကား စကားချပ်။)
ဆေးစွမ်းပြယ်သွားတဲ့ အချိန်မှာတော့ ခံပေတော့။ တစ်ညလုံးလိုလို ကထား ၊ ခေါင်းတွေ ဘယ်ညာ တရားလွန် ရမ်းထားတဲ့ အတွက်ကိုယ်လက်ကိုက်ခဲခြင်း၊ ဇက်နာခြင်း၊ အုံးလွဲခြင်း၊ သည်းခြေရည်ကို မူးယစ်ဆေးက ဖြတ်ထားတဲ့ အတွက်အစားမစားချင်ခြင်း၊ သည်းခြေရည်မထွက်သဖြင့် ခံတွင်းပျက်ခြင်း၊ ကလပ်ထဲတွင် အချိုရည်တွေ ဘီယာတွေ အဆမတန်သောက်ထားခြင်းကြောင့်ကျောက်ကပ်မှ အဆမတန် အလုပ်လုပ်ရသဖြင့် မကြာခဏ ဆီးသွားရခြင်း (ဘာကြောင့် ဆီးသွားရသလဲဆိုရင် ဆေးအာနိသင်ကြောင့် တရားလွန်အောင် ကတယ် ...ကတော့ မောတယ် မောတော့ သောက်တယ် သောက်တော့ ပေါက်တယ်) စတဲ့ ဝေဒနာတွေကို တသီကြီးခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ဒါက ရေတိုခန္ဓာကိုယ်ပျက်စီးမှုတွေ။
ရေရှည်ပျက်စီးခြင်းတွေကတော့ အင်မတန် ကြောက်စရာ ကောင်းလှပါတယ်။ဆေးတွေကို ရက်ဆက်သုံးလာရင် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ စိတ်တွေ တိုလာမယ်။ ဘာမှဟုတ်တဲ့ ကိစ္စကလေးတွေကိုတောင် စိတ်က ရုတ်တရက် တိုသွားတတ်တယ်။နောက်ပြီးရင် မှတ်ဥာဏ်တွေလျော့ လာမယ်။ စကားတစ်လုံး အကြောင်းအရာ ကလေးတစ်ခုကို ခဏလေးနဲ့ မေ့မေ့သွားတတ်တယ်ကျောင်းသွားတွေအနေနဲ့ဆိုရင် ဘယ်လောက် စာကျက် ကောင်းပါတယ် ဆိုတဲ့သူပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီဆေးသုံးဖူးပြီဆိုရင် စာတပုဒ်၊ပုစ္ဆာတစ်ပုဒ်ကို လွယ်လွယ်နဲ့ မရတော့ဘူး အရင်က ၁၅မိနစ်လောက် ကျက်လို့ရတဲ့ စာကို ခု၁နာရီလောက် ကျက်နေရပြီ။ ပြီးတော့ မှတ်မိလားဆိုတော့ အင်း .... မှတ်မိသလိုပဲ ....
အဟဲ .... သိပ်မသိတော့ဘူး ဆိုတာတွေ ဖြစ်လာမယ်။ နောက်တစ်ချက် ကတော့ အကြောတွေ ပျက်စီးလာမယ်။ ဘာကြောင့် ပျက်စီးလာသလဲဆိုရင် ဒီဆေးက လူအရိုးတွေမှာ ကပ်နေတဲ့ အကြောမျှင်တွေ တခါတည်း ဆွဲဆန့်ပစ်လိုက်လို့ပါ။
ဘယ်နေရာကနေစပြီးတော့ ပျက်စီးသလဲဆိုရင် ကိုယ်နေစဉ် အသုံးပြုနေရတဲ့ အစိတ်အပိုင်းက အကြောတွေက စပြီးတော့ ပျက်စီးကုန်ပါတယ်။ ဥပမာဗျာ ခင်ဗျားက နှုတ်ခမ်းကိုက် တတ်တယ်ဆိုပါတော့ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ခင်ဗျားနှုတ်ခမ်းကို ခင်ဗျားကိုက်မိမှန်းမသိ ကိုက်တတ်လာတယ်။ခင်ဗျားသတိထားမိတဲ့ အချိန်မှာ ဒီအကျင့်ကြီးက စွဲသွားပြီ။ ညအိပ်ပြီဆိုရင် ခြေထောက်တွေက အကြောဆွဲပါတယ်။ ဆတ်ခနဲ ဆတ်ခနဲ တွန့်ပြီးတော့ အကြောဆွဲတာ။ပြီးတော့ လန့်လန်နိုးပါတယ်။ ညဖက်အိပ်နေရင်းနဲ့
နုလုံးကတအားခုန်လို့ မောတတ်ပါတယ်။ တချို့ဆို ဆေးသုံးရင်း ကရင်းနဲ့ ဒစ်စကိုထဲတင် နုလုံးကွဲပြီးတော့ သေသွားတာတို့၊ ဆေးသုံးများသွားပြီးတော့ လေဖြတ်သလို အကြောတွေ သေသွားလို့
ထမ်းထုတ်သွားရတာတွေ အိမ်မှာတင် ဆေးကို သုံးရင်း သုံးရင်းနဲ့ ရူးသွားပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတ်သေကြတာ တိုက်ပေါ်ကနေ ခုန်ချကြတာတွေ ဖြစ်ကြပါတယ်။ဆေးကို ၁ပတ်လာက် ရက်ဆက်သုံး ပြီးတော့ ၂ရက်လောက် ပြတ်သွားပြီ ဆိုရင်တော့ ခင်ဗျားကောင်းကောင်းကြီး ဒုက္ခရောက်ပြီ မှတ်ပေတော့။မက်ပါပြီ အိပ်မက်ဆိုးတွေ။ သရဲတပ်ကြီးနဲ့ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း နောင်ချိန်ချရတာမျိုးတွေ၊ လမ်းမှာ တွေ့သမျှကားတွေ လိုက်တိုက်တာတွေ၊
သရဲက ကိုယ့်ကို ခေါင်းဖြတ်သတ်နေပါပြီ ကိုယ့်လည်ပင်းကို သရဲညှစ်ပါတယ်လို့ ထင်လိုထင် အဲသလို အိပ်မက်ဆိုးတွေ မက်ပါတယ်။ ဒါတွေက ရေရှည်ဆိုးကျိုးတွေ။
ဒီတော့ကောင်းပြီ ဘာကြောင့်ဒီလောက် ဆိုးကျိုးတွေ ပေးတဲ့ Estacy ကိုမှ လူငယ်တွေ ဘာကြောင့် မက်မက်မောမောသုံးစွဲနေကြသလဲ။နေ့စဉ် သုံးစွဲလိုကြသလဲ။ ဘာကြောင့် လူငယ်တွေ Ecstacy ကိုစွဲလန်းသလဲဆိုရင် လူငယ်သဘာဝ နိုက်ကလပ်တို့ စတိတ်ရှိုးတို့ဆိုတာ သွားကြပါတယ်။ ကျွန်တော်ဆို ငယ်ငယ်က ဘာစတိတ်ရှိုးမဆို အကုန်သွားပါတယ်။ ဘာကြောင့်သွားလဲ လို့တော့ မမေးပါနဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ကို မရှိတာ။အဲဒီနေရာတွေကို အဲဒီလို လူငယ်အချိန်တွေတုန်းက သွားကိုသွားချင်တာ။ ဒီလိုသွားရင်းကနေ Ecstacy ကို စမ်းသုံးဖြစ်ကြပါတယ်။
ခုခေတ်လူငယ်ဆိုတာ ကားသော့တစ်ချောင်း၊ လက်ကိုင်ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့ စမတ်ကျကျ ၀တ်စားသွားလာနေကြတဲ့ သူတွေ များပါတယ်။အသက်ကလည်း ငယ်ငယ် ဘာကိုမဆို စူးစမ်းချင်တဲ့ အရွယ် ဘယ်အရာကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ငါလုပ်လိုက်မယ်ကွ ချလိုက်မယ်ကွလို့ ဖြစ်နေတဲ့ အရွယ်တွေဟာ မူးယစ်ဆေးရဲ့သားကောင်တွေဖြစ်လာပါတယ်။ မူးယစ်ဆေး ရောင်းချသူ တွေဟာ ဒီလို လူငယ်တွေကိုပဲ ပစ်မှတ်အဖြစ် ရှာတတ်ကြပါတယ်။
နိုက်ကလပ်မှာ သူငယ်ချင်းတွေ သုံးရင်း ကြုံလို့ တစ်ပြားလောက်ပါကွာ နောက်နေ့တွေကျတော့ တစ်ပြားလောက်ပါကွာ ဆိုပြီးတော့ သုံးစွဲကြရင်းကနေမူးယစ်ရဲ့ သားကောင်တွေ ဖြစ်လာကြရင်း နောက်ဆုံး အဖိုးတန်လှပါတဲ့ အသက်တစ်ချောင်းကိုပါ ပေးဆပ်လိုက်ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ လူငယ်ဆိုတာ တိုင်းပြည်ရဲ့ အိမ်မက်တွေပါ။ တိုင်းပြည်တစ်ပြည်ရဲ့ အိမ်မက်တွေကို အကောင်အထည် ဖော်ပေးကြရတဲ့ သူတွေပါ။ ကျွန်တော်စာရေးတော်တော်လေး ပျင်းပါတယ်။
ဒါပေမယ် ဒီ Ecstacy စိတ်ကြွမူးယစ်ဆေး အကြောင်းကို ဘာကြောင့် ဒီလောက် အသေးစိတ် ရေးဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီမူးယစ်ဆေးဝါးကို အများဆုံး အသုံးပြုနေတာ လူငယ်တွေ ဖြစ်နေကြလို့ပါ။ဘယ်ခေတ်ကိုပဲ ကြည့်ကြည့် လူငယ်တွေဟာ မူးယစ်ဆေးရဲ့ သားကောင်တွေ ဖြစ်နေကြ ရပါတယ်။ ဖြစ်လည်း ဖြစ်ခဲ့တယ်။ ဖြစ်လည်း ဖြစ်နေဆဲပဲ။ဒီမှာဆိုရင် Estacyကို မူးယစ်ဆေးလို့ကို သတိမမူ ကြတော့ဘူးဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တွေ မူးယစ်ဆေးသုံးကြရလို့ ဘာများ အကျိုးကျေးဇူးရခဲ့ဖူးကြသလဲဗျာ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ လှပမြင့်မားလှတဲ့ အနာဂတ်တွေကို မူးယစ်ဆေးက လောင်တိုက်သွင်းပစ်လိုက်တယ်။
နုပျိုလန်းဆန်းလှတဲ့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို ရက်ရက်စက်စက် ၀ါးမြိုပစ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော်တို့မိဘတွေရဲ့ မျော်လင့်ချက်တွေကို ရိုက်ချိုးပစ်လိုက်တယ်။ကျွန်တော်တို့ ပင်ပန်းကြီးစွာရှာထားရတဲ့ ငွေကြေးဥစ္စာတွေကို တခဏအတွင်း လုယူသွားတယ်။
မူးယစ်ဆေးဟာ ကျွန်တော်တို့ လူငယ်ထုအတွက် ဘာများ ကောင်းသလဲဗျာ။ကျွန်တော်တို့ လူငယ်တိုင်း လူငယ်တိုင်းရဲ့ လှပမြင့်မားတဲ့ အနာဂတ်၊ ကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ကြီးရဲ့ အိမ်မက်တွေ၊ မိဘတွေရဲ့ မျော်လင့်ချက်တွေ၊ငွေကြေးဥစ္စာတွေကို ကာကွယ်ဖို့ စောင့်ရှောက်ဖို့ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့အတွက်အတွက် မူးယစ်ဆေးကို ဝေးဝေးကနေ ရှောင်ရှားကြပါစို့လားဗျာ။
ခုလေးတင်မှ ရောက်လာတဲ့ မေးလ် လေးကို ပြန်လည်ဝေမျှ ပေးလိုက်တာပါ.... မူးရစ်ဆေး ကင်းဝေးကြပါစေ ....
Posted by zawmaung ရေးသားချိန် 4:58 AM6comments:
ကဲ အခုဘဲ စလိုက်ကြမလား ..
လူဦးရေလွန်စွာမှနည်းပါးလှသောနိုင်ငံ တစ်ခုတွင်.. နိုင်ငံတော် အစိုးရမှ ဥပဒေသစ်တရပ်ကို ထုတ်ပြန်ကြေငြာလိုက်ရာဝယ်.. လက်ထပ်ထားပြီး ငါးနှစ်အတွင်းမှာ အကြင်လင်မယားတိုင်း ရင်သွေးတယောက်ရရှိထားပြီး ဖြစ်ရပါမယ် တဲ့..။ ဒီတာဝန်ကို မကျေပွန်ခဲ့ရင် သက်ဆိုင်ရာမှကြီးကြပ်၍ ယောက်ျားတယောက်ကို စေလွှတ်ကာ ထိုအိမ်ထောင်ရှင်မအားမိခင်တယောက် ဖြစ်လာစေရေးအတွက် လိုအပ်သည်များကို တာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးမှာ ဖြစ်ပါသတဲ့။
ငါးနှစ်မြောက် မင်္ဂလာနှစ်ပတ်လည် ကျင်းပပြီး နောက်တနေ့မှာတော့ အခုထိကလေးမရသေးတဲ့ အကြင်စုံတွဲဟာ ဒီကိစ္စကို စဉ်းစားရတော့တာပေါ့..
"မိန်းမရေ... ကိုယ်ကတော့အလုပ် သွားရတော့မယ်ကွာ .. ဒီကနေ့ သက်ဆိုင်ရာရုံးချုပ်က လွှတ်တဲ့လူ လာလိမ့်မယ် ထင်တယ် .. ဘယ်တတ်နိုင်မှာလဲ အချစ်ရာ ..ကိုယ်ကမှအဖြစ်မရှိခဲ့တာကိုး ..မင်းသာဖြစ်လာသမျှကို သတ္တိရှိရှိနဲ့
ရင်ဆိုင်ပေတော့နော် ... ကိုယ်သွားတော့မယ်ကွာ..."
အဲဒီလိုပြောပြီး ခေါင်းကိုငိုက်စိုက်ဆွဲ ... မျက်လွှာကို အောက်ကိုချပြီးစိတ်ဓာတ်ကျစွာနဲ့ပဲ အိမ်ကနေ ထွက်သွားတော့တယ်..။ သူ့အမျိုးသမီးကတော့အိမ်မှုကိစ္စတာဝန်တွေကို ဆက်လုပ်နေတာပေါ့ ။
ခဏနေတော့ အိမ်ရှေ့ကနေ ခေါင်းလောင်းသံ ကြားလိုက်ရတယ် .. တကယ်တော့တံခါးဝမှာ စောင့်နေတဲ့သူကသက်ဆိုင်ရာက လွှတ်လိုက်တဲ့ လူမဟုတ်ပါဘူး..။မွေးကင်းစအရွယ်ကလေးလေးတယောက်ကို ဓာတ်ပုံရိုက်ပေးဖို့ လာရင်း
အိမ်နံပါတ်မှားပြီး ရောက်လာတဲ့ ကင်မရာမင်း( ဓါတ်ပုံဆရာ)တယောက်ပါ..အမျိုးသမီးက တခါးဖွင့်လိုက်ချိန်မှာပဲ ဓာတ်ပုံဆရာက စပြောပါတယ်…
"မင်္ဂလာရှိသော နံနက်ခင်းပါခင်ဗျာ။ ကျွန်တော် လာရင်းကိစ္စကတော့... "
"သိ.. သိ.. သိပါတယ်ရှင့်... ဦး.. အဲ ကိုဘယ်သူ... "
"ကျနော့်နာမည် ဝေဘာဂီပေါက်ကျိုင်း လို့ ခေါ်ပါတယ် ခင်ဗျာ... ကျွန်တော် အထူးပြုထားတဲ့အလုပ်အကိုင်က... "
"သိ.. သိပြီးသားပါရှင် ခဏထိုင်ပါဦး "
"ခင်ဗျား အမျိုးသားလဲ သဘောတူမယ် ထင်ပါတယ်ဗျာ ... "
"ဟုတ်တယ်ရှင့်.. ဒီမနက်ပဲ ကျမတို့ ဒီအကြောင်း ပြောဖြစ်ကြတာပါ ... ဒီကိစ္စကိုဒီအိမ်ထဲမှာပဲ ရှင်းဖို့ မှာသွားပါတယ်... "
"ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ... အဆင်သင့်ဖြစ်ရင် အခုပဲ စလိုက်ကြရအောင်လေ .. "
"ဟို.. ဟိုလေ... ကျမက ဒါမျိုးတွေ အတွေ့အကြုံမရှိဖူးတော့ ဟိုဒင်း ... ဘယ်ကဘယ်လိုစရမယ်
"ဒီကိစ္စအတွက်တော့ ကျနော့်ကို အားကိုးလိုက်စမ်းဘာဗျာ အင်း... ကျနော့်အထင်တော့ဒီဆိုဖာပေါ်မှာရယ် ဟောဟိုက စာကြည့်စားပွဲဘေးမှာရယ်.. ရေချိုးခန်းထဲမှာ..အင်္ကျီဗလာနဲ့.. ဒီကော်ဇောပေါ်မှာ ဆိုရင်တော့ ဘောင်းဘီတို ဒါမှမဟုတ် အပေါ်ကအဝတ်တထည်တော့ ဝတ်ထားမှ ကောင်းမယ်ဗျ ... "
"ဘုရား..ဘုရား.. အဲလောက်ကြီးတောင်လား ... "
"ဟုတ်တယ်လေဗျာ ... တခေါက်ထဲနဲ့တော့ ဘာပုံထွက်လာမလဲမှ မသိနိုင်တာ ..ပုံစံခြောက်မျိုးလောက်ဆိုတော့ စိတ်ချရတာပေါ့ အမကြီးရာ ... "
"ကျမတောင်းပန်ပါတယ်ရှင်.. အခုကြားရသမျှကတော့ ဘယ်လိုမှ မအပ်စပ်လို့ပါ .."
"ဒီလိုပေါ့ဗျာ.. ဘာကိုမှ ချုပ်တီးမထားဘဲ စိတ်လွတ်ကိုယ်လွတ် လွှတ်ပေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ အောင်မြင်မှုက ပိုပြီး ကြီးမားတတ်တယ် မဟုတ်လား... "
"အရင်ဦးဆုံး ကျနော် ဖန်တီးခဲ့တဲ့ ပုံတွေကို ပြချင်ပါတယ်ဗျာ ..."
"ရှင်ဖန်တီးခဲ့တာ... အင်း ..ပြလေ... ရှင့်မှာ အချိန်ရှိတယ် မဟုတ်လား .. "
"ဟာ... အလောသုံးဆယ် မလိုပါဘူးဗျာ.. ဒီအလုပ်မျိုး လုပ်တယ်ဆိုတာ မြန်မြန်ဆန်ဆန်
ပြီးပြီးရော ဘယ်ရပါ့မလဲ... "
" ဒီပုံကို ကြည့်ကြည့်ပါဗျာ။ ချစ်ဖို့ မကောင်းဘူးလား။ ဒီအတွက် ကျနော်လေးနာရီတိတိ အချိန်ပေးခဲ့ရတယ်။ ထွက်လာတဲ့ ရလဒ်က လှမှလှပဲလေ "
"ဟင်း ... ဂလု ...(သက်ပြင်းတွေချလိုက် တံတွေးမြိုလိုက် လုပ်နေရင်း) ဟုတ်တယ်နော် ကလေး လေးက ချစ်စရာလေး... ဒါပေမယ့် လေးနာရီကြီးကတော့ မများဘူးလား ရှင်… "
"ဒါပေါ့.. ဒါပေါ့... နားနားပြီး ဆက်လုပ်ရတာပေါ့.. ကြည့်စမ်းပါဦးဗျာ.. ဒီအောက်ကပုံကိုကြည့်စမ်းပါ.. အဲဒီတုန်းက ကျနော်က ဘစ်စ်ကား ခေါင်မိုးပေါ်မှာ ဗျ ..”
"ကားခေါင်မိုးပေါ်မှာ.. အမေလေး... မကြားဖူးတာတွေ ကြားနေရတယ်.. ထူးဆန်းပါပေ့ရှင်.. "
"ဒီလိုဗျ... အမျိုးသမီးတယောက် ... သူကလဲ ကျနော့် အလုပ်အကိုင်ကို သိတယ်..ယုံကြည်တယ်.. အားကိုးတယ်ပေါ့ဗျာ... သူက သူ့အမျိုးသားကို အထူးအဆန်းပြချင်လို့ဆိုပြီး ကျနော့်ကို အလုပ်လာအပ်တာပေါ့.. အတွေ့အကြုံရှိနေတော့လဲမခက်ပါဘူးလေ။ အဲဒီအခေါက်က အလုပ်သဘောအရ ဆိုပေမယ့် ကျနော်ကတကယ့်ကို စေတနာနဲ့ စိတ်နှစ်ပြီး ကြိုးစားပေးခဲ့တာဗျ.. "
"ဟော.. ဟောဟိုပုံကိုကြည့် အဲဒါက ပန်းခြံထဲမှာ.. "
"ပန်းခြံထဲမှာဆိုတာက လူတွေနဲ့လေ.. လူရှေ့သူရှေ့လဲ အလုပ်ဖြစ်တယ် ဟုတ်လား..... သူများတွေက ဝိုင်းကြည့်နေမှာပေါ့.. "
"လူတွေကြည့်တာ မကြည့်တာ ဂရုမစိုက်ပါဘူးဗျာ.. ကုန်ကုန်ပြောမယ် ကျနော်ကလူတမျိုးဗျ .. လူတွေ ဝိုင်းအုံကြည့်လေ ကျနော့်ရဲ့ အရည်အသွေးတွေကတောက်ပြောင်လေပဲ ... အဲဒီတခေါက်ကတော .. ဘယ်လိုပြောမလဲ.. အမေလုပ်သူကဗီဒီယိုမင်းသမီးဗျ.. သူက အဲဒီနည်းနဲ့ နာမည်ကြီးချင်တာလေ .. အဲဒီနောက်တော့ တကယ်လဲ ဟိုးလေးတကျော် ဖြစ်သွားတာပါပဲဗျာ.... "
"ဗုဒ္ဓော.. ဘုရား.. ဘုရား.. "
"ဟုတ်တယ်ဗျ .. နေ့လည် နှစ်နာရီမှာ စလိုက်တာ ညနေ ငါးနာရီမှ ပြီးတယ်..။ အဲဒီတုန်းကလောက် တခေါက်မှ မပင်ပန်းဖူးဘူးဗျာ.. တကယ်ပါပဲ.. အဲဒီအချိန်က တုန်နေအောင် ချမ်းနေတဲ့ အချိန်ပေါ့။ လာကြည့်ကြတဲ့ လူတွေကလဲ ပြုံလို့ ခဲလို့.. အထပ်ထပ် စုအုံနေတာတင် အဝိုင်းကြီး ငါးထပ်လောက်ရှိတယ်။ လူက တအားများလေတော့ အလုပ်လုပ်ရတာလဲ သိပ် ခရီးမတွင်ဘူးလေ.."
"ရှင်တို့က လူအုပ်ကြီးရှေ့မှာ... အိုး ရေး အိုး ရေး.. "
"ဘယ်နေရာကြည့်ကြည့် လူအုပ်ကြီးပဲ တွေ့ရတယ်.. ပရိတ်သတ်ကလဲ ပွဲကျပြီးလက်ခုပ်တွေဘာတွေ ဝိုင်းတီးပေးကြတာဗျ။ အဲဒီမှာ အမေလုပ်သူက စိတ်တွေတိုလာတာပါ ဘဲ ကျနော်ကိုယ်တိုင်ကပဲ
ပွဲမပျက်အောင် ထိမ်းသိမ်းပေးခဲ့ရတာပေါ့ .. နောက်တော့ ရဲတွေရောက်လာပြီးကျနော့်ကို လူကူရှင်းပေးတယ်.. အမှန်က ကျနော်က နောက်ထပ် နှစ်ကွက် သုံးကွက်လောက် ဆွဲချင်သေးတာဗျ ..
ဒါပေမယ့် ချမ်းကလဲ ချမ်းနေကြပြီဆိုတော့…
(အယ်လ်ဘမ်ကို ပြန်ပိတ်၍ )
ကဲ… အခုပဲ စကြမလား… ကျနော် ထောက်တံထုတ်လိုက်မယ်လေ… "
ပြောပြောဆိုဆို ဝေဘာဂီပေါက်ကျိုင်း သူ့ရဲ့ ကင်မရာထောက်တဲ့ ထောက်(Tripod)ကိုအိတ်ထဲကထုတ်ဖို့ ဇစ်ဆွဲသံလဲ ကြားလိုက်ရော....
အဲဒီအမျိုးသမီးလဲ နေရာမှာတင် မေ့လဲကျသွားပါလေရောဗျာ.....၊။။
မနေည က ရောက်လာတဲ့ ပေါက်ကျိုင်း နပန်းလုံးဖက် သူငယ်ချင်း သနပ်ခါး ရဲ့ မေးလ် လေးတစ်ပုဒ်ပါ..။
ဒီကောင် ပဲပုပ် နဲ့ နောင်ဂျိန်ပလေးပြီး အလံဖြူ ပြလာရပြန်ပြီနဲ့ တူပါတယ်..
ဒီ လင်မယား နှာကစ် နေရင် .. ဒီလိုဘဲ သူထက်ငါ ပေါက်ကျိုင်း ဆီ ပေါက်ကရ တွေ ပို့ နေကြ .. ဒီ တစ်ခါ သနပ်ခါး ပထမ ဆု ပွတ်ကာသီကာ ရသွားပါကြောင်း...ဟီဟိ..
Posted by zawmaung ရေးသားချိန် 2:33 AM 1 comment:
မိန်းမ နဲ့ ယောင်္ကျား ..
ပေါက်ကျိုင်း မေးလ် ထဲကို ရောက်ရောက်လာတဲ့ ချစ်ခင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများ ရဲ့ စာစုအတိုအစ လေးများကို ကောင်းနိုးရာရာ စုစည်းတင်ပြပေးလိုက်တာပါ..
အော် .. ကမ္ဘာဦးစ ကတည်းက နီး တစ်ကျက်ကျက် ဝေး တစ်သက်သက် ဆိုသလို ကျွန်တော် ကျွန်မ တို့ တစ်တွေ အကြောင်းလေး ..
တခါက church တစ်ခုမှာ သီလရှင် ၆ပါးဟာ အခန်းကို ဆေးသုတ်ဖို့ တာဝန်ပေးခြင်းခံရတယ်။အဲဒီနေ့က နေအရမ်းပူတာမိုလို့ သီလရှင်လေးတွေရဲ့ အနက်ရောင်ဝတ်ရုံတွေက ကြာလာတော့အိုက်လာတယ်။ဒါနဲ့ churchမှာ လည်း လူမလာတဲ့(လူရှင်းချိန်)ဖြစ်လို့ တခါးပိတ်ပြီး အ၀တ်တွေချွတ်လို့ ဗလာကျင်းနဲ့ဆေးဆက်သုတ်ကြတယ်။ဒီအချိန် တခါးခေါက်သံကြားရတယ်။
“ကျွန်တော် မျက်မမြင်တစ်ယောက်ပါ။ ၀တ်ပြုချင်လို့ပါ။”
ဒါနဲ့ ဖွင့်ပေးလိုက်ကြတယ်။ အခန်းထဲရောက်လာတဲ့ မျက်မမြင်ဟာအခန်းပတ်လည်ကိုကြည့်တယ်။ ပြိးတော့ သူတို့ကိုလည်း လှမ်းကြည့်ပြီးတော့ဒီလိုရေရွတ်လိုက်တယ်တဲ့။
“အို ဘုရားသခင် ကျွန်တော်ကို အခုလို အချိန်အခါမျိုးမှာ မျက်လုံးမြင်ခွင့်ပေးတဲ့အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းပါပဲ ”
နာမည်ကြီး စုံစမ်းထောက်လှမ်းရေးအဖွဲ့ တစ်ခုက အလွန်အင်မတန်မှ ကိုရက်စက်သော လူသတ်သမားတစ်ယောက်ကို အလိုရှိနေတဲ့အတွက် လူရွေးချယ်ကြပါတယ် ။ နောက်ဆုံး ဆန်ခါတင် အနေနဲ့ ယောင်္ကျား ၂ ယောက်နဲ့ မိန်းမ ၁ ယောက်ကိုရွေးချယ်လို့ရကြတာပေါ့လေ ။အဲဒီတော့ နောက်ဆုံး စမ်းသပ်မှု အနေနဲ့ သူတို့ ၃ ယောက်ကို စစ်ဆေးကြတာပေါ့ ။
ပထမဆုံး ယောင်္ကျားကို ဗလာကျည်ဆန်တွေ ပါတဲ့ သေနတ် တစ်လက်ပေးပြီးတစ်ဖက်အခန်းမှာ ရှိတဲ့ သူ့မိန်းမကို သွားသတ်ခိုင်းပါတယ် ။အဲဒီ လူက ခါးခါးသီးသီးကို ငြင်းပါတယ် .. သူ့မိန်းမကို သူ မသတ်ရက်ပါဘူးတဲ့ ...။ ဒုတိယ တစ်ယောက်ကလဲ ဒီလိုပဲ ကိုယ့်မိန်းမတော့ ကိုယ် မသတ်နိုင်ပါဘူးလို့ပဲ
အဲဒါနဲ့ နောက်ဆုံး အမျိုးသမီး အလှည့်ရောက်လာတာပေါ့အမျိုးသမီးကိုပြောတယ် .. ဒီသေနတ်ကို ယူသွားပြီး ခင်ဗျား ယောင်္ကျားကိုပစ်သတ်လာခဲ့ပါပေါ့ ..အမျိုးသမီးက အခန်းထဲ ၀င်သွားတယ်
အခန်းထဲက ဆူဆူညံညံ အသံတွေ ကြားရပြီး အမျိုးသမီးက မောမောပန်းပန်းနဲ
ပြန်ထွက်လာတယ်.. အပြင်က အရာရှိတွေကို စိတ်ဆိုးဆိုးနဲ့ ပြောလိုက်တယ်ရှင်တို့က ဗလာကျည်ဆန်တွေ ဘာလို့ထည့်ထားတာလဲ ..အမလေး မနဲကို ရိုက်သတ်ခဲ့ရတယ်
အသက်၄၀ခန့်ရှိသောလူပျိုသိုးကြီးသည် မိဘများအားအိမ်ထောင်ပြုချင်ကြောင်း ဖွင့်ဟပြောသည်။
ထိုအခါမိဘဖြစ်သူတို့က ရိုးအသော သားအကြာင်းသိသဖြင့် ဒါဆိုမေမေတို့ကမင်းနဲ့ရှေ့သွားနောက်လိုက်ညီမဲ့ အသက်၃၀ကျော်မိန်းခလးတစ်ယောက်ရှာပေးမယ်နော်။
အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ် နှစ်ယောက်ယူလို့မရဘူးလားမေမေ...
မရှိရင် ပိုကောင်းသေး ...
မိန်းမ ။ ။ရှင်တို့ယောင်္ကျားတွလေ ကျမတို့မိန်းမတွေမရှိရင်တော်တော်စိတ်ညစ်ရမယ်၊ မိန်းမတွေရှိနေလို့သာရှင်တို့ပုဆိုးတွေ၊ဘောင်းဘီ၊အင်္ကျီတွေချူပ်ပေးမဲ့သူရှိတာ´
ယောင်္ကျား ။ ။အိုမရှိမဖြစ်ဟုတ်ပါဘူးကွာ၊ငါတို့ အဲဒီဘောင်းဘီ၊ပုဆိုးတွေဝတ်ရတာလည်း မင်းတို့မိန်းမတွေရှိနေလို့ကွ၊မိန်းမတွေမရှိရင် ငါတို့ဘာမှဝတ်စရာ မလိုဘူးကွ´
ငရဲ နှင့် နတ်ပြည်သို့သွားမည့် တံခါးပေါက်ရှေ့တွင်မိန်းမများ အားလုံးကို သိကြားမင်းကစုရုံးစေသည် ။
"အားလုံး တန်းစီလိုက်ကြစမ်း ၊ ကိုင်း...ဟုတ်ပြီ ၊ကိုယ့်ယောကျာ်းကို တစ်ကြိမ်လောက်ပဲဖြစ်ဖြစ် သစ္စာဖောက်ခဲ့တဲ့သူ ရှေ့တစ်လှမ်းတိုးလိုက်စမ်း"
မိန်းမအားလုံးလိုလို ရှေ့တိုးလိုက်ကြသည် ၊သစ္စာရှိသော မိန်းမတစ်ဦးသာ နေရာမှမရွေ့ဘဲရပ်နေသည် ၊ သိကြားမင်း က အမိန့်ပေးသည်။
" အားလုံးကို ငရဲပြည်ပို့လိုက် ၊ ဟေ့... ဟို "ဆွံ့အနားမကြားမ" ကိုပါပို့လိုက်
အတွေးကိုယ်ဆီ ရှိကြသည် ...
လေယာဉ်ပျက်ကျသဖြင့် ယောကျာ်းခရီးသည်များနှင့် မိန်းမခရီးသည်များ မြစ်ကမ်းတစ်ဖက်တစ်ချက်စီသို့ ရောက်သွားကြသည် ။ မိန်းမခရီးသည်များနှင့်မည်သို့ပူးပေါင်းနိုင်မည်နည်း ဆိုသည်ကို ယောကျာ်းများ တိုင်ပင်ကြသည် ။
"ဟိုဖက်ကမ်း ကိုမြန်မြန်လေး ရေကူးသွား ကြရအောင်"
အသက် ၂၀-အရွယ်လူငယ်ကအားတက်သရောပြောသည် ၊
"လှေတစ်ခုလုပ်ပြီး ကူးသွားရင် ပိုကောင်းမယ်..”
အသက် ၃၀-အရွယ်ကပြောသည် ။
"ဘယ်ကိုမှ ကူးစရာ မလိုဘူး ၊သူတို့ဟာသူတို့ ကူးလာကြလိမ့်မယ်”
အသက် ၅၀-အရွယ် က ပြောတယ်..
" လက်ထပ်မှာသာ ထပ်လိုက်ပါသမီးရယ် ၊ ငရဲတကယ်ရှိကြောင်း သိအောင်လုပ်ဖို့ မေမေ့တာဝန်ထားလိုက်စမ်းပါ ”
ယောင်္ကျားလုပ်သူထံ ထောင်ဝင်စာလာတွေ့ပြီး မိန်းမလုပ်သူသည် .. ထောင်မှုးကြီးအားသွားတွေ့ကာ မေတ္တာရပ်ခံသည်။
“ထောင်မှုးကြီးရှင့်… ကျွန်မရဲ့ယောင်္ကျားကို ဒီထက်သက်သာတဲ့အလုပ် မပေးနှိုင်ဘူးလားဟင်”
“ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ရှင်…ဒါပေမဲ့..ညတိုင်းညတိုင်း တခြားထောင်သားတွေနဲ့အတူ မြေအောက်လှိုင်ခေါင်းတူးရတာ ပင်ပန်းတယ်ပြောလို့ပါ”
ယောင်္ကျား ။ ငါသေသွားခဲ့ရင် မင်း နောက်အိမ်ထောင်ပြုမှာလား ?
မိန်းမ ။ ဟင့်အင်း .. ကျွန်မညီမနဲ့ပဲ နေမှာ .. ဒါနဲ့ ရှင်ကော .. ကျွန်မသေသွားရင် နောက်အိမ်ထောင်ပြုမှာလား ?
ယောင်္ကျား ။ ဟင့်အင်း .. ငါလဲ မင်းလိုပဲ .. မင်းညီမနဲ့ပဲနေမှာပေါ့
မိတ်ဆွေနှစ်ယောက် ဆုံကြသည်။ တစ်ယောက်ကမေးသည်။
"ဟေ့လူ၊ ခင်ဗျားမျက်နှာလည်း မကောင်းပါလား၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဗျ"
"ညက အိပ်မက်ဆိုးမက်တယ်။ ထက်ထက်မိုးဦးရယ်၊ နန္ဒာလှိုင်ရယ်၊
အိန္ဒြာကျော်ဇင်ရယ်၊ ပန်းဖြူရယ်ပေါ့ဗျာ ကျုပ်ကို သူပိုင်တယ် ငါပိုင်တယ်ဆိုပြီးကျုပ်မိန်းမနဲ့ ငြင်းကြရင်းနဲ့ ရိုက်ပွဲကြီးဖြစ်သွားတယ်ဗျာ"
"ကျုပ်မိန်းမ အနိုင်ရသွားတယ်ဗျာ၊ တောက်"
မိန်းမတစ်ဦး နတ်ပြည်ရောက်နေရင် ဘယ်လိုခေါ်မလဲ....
မိန်းမတစ်အုပ် နတ်ပြည်ရောက်နေတာ ဆိုရင်ကော...
ဒါဆိုရင် မိန်းမတွေအားလုံး နတ်ပြည်ရောက်နေရင်ကော....
ချစ်သူ့အိမ်မှာ ကျွန်တော်ရောက်နေ၏။ ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက် ဆိုဖာကြီးပေါ်မှာ အတူယှဉ်တွဲ ထိုင်ကြ၏။ ကျွန်တော်က ချစ်သူကို တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ဖက်လိုက်၏။ ချစ်သူကလည်း ကျွန်တော့်ကို
တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ပင် ပြန်ဖက်လိုက်၏။ သို့သော် သိပ်မကြာပါ။ချစ်သူကကျွန်တော့်ကို အသာတွန်းပြီး ရုတ်တရက် ထရပ်လိုက်၏။
ပြီးတော့ မီးခလုတ်ကို လှမ်းပိတ်၏။ ကျွန်တော် အရိပ်အခြည်ကို ကောင်းကောင်း နားလည်လိုက်ပါသည်။ သြော်…သူအိပ်ချင် ရှာပြီကိုး။
ကျွန်တော် သနားစိတ်ဖြင့် ထ ပြန်ခဲ့ပါသည်။ ...............
မမြင်ချင်ဘူး ဟေ့ ...
ညဉ့်အတော်နက်နေပြီ။ သမီး၏ ချစ်သူက မပြန်သေး။ ချစ်တေးတွေ ကျူနေဆဲ။
``အချစ်ရယ်…. မင်းဟာ မောင့်ဘ၀ရဲ့ အလင်းရောင်ပါကွာ၊ မောင့်နှလုံးသားရဲ့
အလင်းရောင်ဟာလည်း မင်းပါပဲ။ နောက်ပြီး….မောင့်မျက်လုံးအစုံရဲ့ အလင်းရောင်´´
သူ့စကားမဆုံးခင်မှာ အခန်းအပြင်ဘက်က ဖခင် အတော်စိတ်တိုလာပြီး…
``ဟေ့…သမီးမေရီ၊ အဲဒီ အလင်းရောင်တွေကို ပိတ်ပြီး အိပ်တော့´´ ဟု အော်ပြောလိုက်၏။
အပျော်အပါးမလိုက်စားသော ယောင်္ကျား ...
စုတ်ပြတ် နုံချာနေသော အ၀တ်အစားဝတ် လူတစ်ဦးသည် လမ်းသွားလမ်းလာတို့ထံမှ ပိုက်ဆံတောင်းနေသည်။ သားနားခန့်ညားစွာ ၀တ်ထားသောလူတစ်ဦး လမ်းလျှောက်လာသည်။
“နောင်ကြီးရယ်၊ စားစရာမရှိလို့ပါ၊ စေတနာရှိသမျှ မ,စပါခင်ဗျာ"
“မပေးနိုင်ဘူး၊ မင်းကို ငါးဒေါ်လာလောက် ပေးကြည့်၊ ချက်ချင်းအရက်သောက်ပစ်မှာ မဟုတ်လား”
“ကျွန်တော် အလောင်းအစား မလုပ်တတ်ပါဘူး ခင်ဗျာ”
“အို…ဒါ မဟုတ်လည်း မကောင်းတဲ့မိန်းမဆီ မင်းသွားမှာပေါ့”
“OK…မင်းကိုငါ ငါးဒေါ်လာပေးမယ်… ဒါပေမဲ့ မင်းငါအိမ်ကို ခဏလိုက်ခဲ့ရမယ် ဘာအပျော်အပါးမှမလိုက်စားတဲ့ယောက်ျားတွေ ဘယ်လိုဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာ ငါ့မိန်းမကိုမြင်အောင်ပြချင်လို့….”
အီဂျစ်နိုင်ငံတွင်ဖြစ်သည်။ မိန်းကလေးတစ်ဦးသည် မြေကြီးများကိုအပျင်းပြေ တူးဆွနေသည်။ နောက်တော့ မထင်မှတ်ဘဲ ခပ်မာမာ သတ္တုကိုယ်ထည်တစ်ခုကို သွားစမ်းမိသည်။ သိချင်စိတ်နှင့် မြေကြီးများကို ကြိုးစားယက်ထုတ်ရာ ရှေးခေတ် ခေါင်းတလားကြီးတစ်လုံး ဘွားကနဲပေါ်လာသည်။
ပထမတော့ ကောင်မလေးကခေါင်းကိုမဖွင့်ရဲချေ။ နောက်တော့ ကြောက်စိတ်ကိုစပ်စုချင်သောစိတ်က အနိုင်ယူသွားသည်။ အခေါင်းဖုံးကို မနိုင်မနင်းနှင့် ကြိုးစားပမ်းစားဖွင့်လိုက်သည်။
အခေါင်းထဲတွင်တော့ ရှေးခေတ်ဖာရိုးဘုရင်လေးတစ်ပါး၏ ရုပ်အလောင်းရှိသည်။ အလောင်းမှာ မပုပ်မသိုး အကောင်းအတိုင်းပင် ရှိနေ၏။ ဘုရင်ကလေးမှာ နုနုငယ်ငယ်လေးဖြစ်ရုံမျှမက ရုပ်လဲအလွန်ချော၏။ ကောင်မလေးမှာ ဘုရင်လေးကိုကြည့်ရင်း သနားသွားသည်။ သူမမျက်လုံးထဲမှမျက်ရည်များ
စီးကျလာပြီး ဘုရင်ကလေး၏ ရင်ဘတ်ပေါ်သို့ကျသွားသည်။
အလွန်အံ့သြစရာကောင်းသော အရာများဖြစ်လာသည်။ ဖာရိုးဘုရင်လေးသည် မျက်လုံးများတဖြည်းဖြည်း ပွင့်လာပြီး ခေါင်းတလားထဲမှ ထထိုင်သည်။ ထို့နောက် မိန်းကလေး၏လက်ကို မဟာဆန်ဆန် အသာအယာဆုပ်ကိုင်ပြီး ညင်သာသောအသံဖြင့် -
" မင်းဟာ သိပ်ကြင်နာတတ်ပြီး ချစ်စရာကောင်းတဲ့ မိန်းကလေးပဲ။ မင်းမျက်ရည်ကြောင့် ငါကိုယ်တော်မြတ် ပြန်လည်နိုးထလာနိုင်ခဲ့ပြီ။ မင်းအလိုရှိရာ ဆု (၁၀) ခုတောင်းပါ။ ငါကိုယ်တော်မြတ် ကျေးဇူးဆပ်တဲ့အနေနဲ့ ဖြည့်ဆည်းပေးမယ်"
အလွန်အံ့သြနေသောမိန်းကလေးသည် ပထမတော့ကြောင်ပြီး စကားတစ်ခွန်းမျှ ပြန်မပြောနိုင်ချေ။ နောက်တော့မှ ထစ်ထစ်ငေါ့ငေါ့နှင့် တိုးတိုးလေးပြောသည်။
" ဆု (၁၀) ခုဆို များလွန်းပါတယ်။ ဆုတစ်ခုပဲတောင်းပါ့မယ်။ ဒါပေမယ့် (၁၀)ခါ ဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်နော် "
ဘုရင်လေးက ကတိအတိုင်းလိုက်လျောသည်။ သို့သော် (၇) ခါမြောက်တွင် ဘုရင်လေး ပြန်အသက်ထွက်သွားလေသည်။
ကျွန်တော် ခရီးပန်းလာလို့၊ ဒီမှာတစ်ညလောက် တည်းခွင့်ပြုပါဗျာ။
ဟင့်အင်း... အိမ်မှာ လူမရှိဘူးရှင့်။
ကျွန်မ ဆိုလိုတာက ယောကျာ်းသား မရှိတာကို ပြောတာပါ။
ကျွန်တော်က ယောကျာ်း မဟုတ်လို့လားဗျာ။
အိပ်ခန်းထဲတွင်ဖြစ်သည်။ အိပ်ပျော်စပြုရင်း.. မိန်းမ၏မျက်နှာတွင် အပြုံးရိပ်ပေါ်လာသည်။
"မနက်ဖြန် ငါတို့လက်ထက်တဲ့ ၁၅ နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ပဲ..မနက်ကျရင်ယောက်ျားဆီက လက်ဆောင်တစ်ခုခု ရတော့မှာပဲ.." ဟုတွေးသည်။
"လွန်ခဲ့သော ၁၅ နှစ်ကသာ ဒီမိန်းမကို ငါလည်ပင်းညှစ်သတ်ခဲ့ရင် မနက်ဖြန်ဆို လွတ်ပြီ။
မိန်းမ ။ ။ရှင်တို့ယောင်္ကျားတွလေ ကျမတို့မိန်းမတွေမရှိရင် တော်တော်စိတ်ညစ်ရမယ်၊ မိန်းမတွေရှိနေလို့သာရှင်တို့ပုဆိုးတွေ၊ဘောင်းဘီ၊ အင်္ကျီတွေချူပ်ပေးမဲ့သူရှိတာ´
ယောင်္ကျား ။ ။အိုမရှိမဖြစ်ဟုတ်ပါဘူးကွာ၊ငါတို့ အဲဒီဘောင်းဘီ၊ပုဆိုးတွေ ၀တ်ရတာလည်း မင်းတို့မိန်းမတွေရှိနေလို့ကွ၊မိန်းမတွေမရှိရင် ငါတို့ဘာမှဝတ်စရာ မလိုဘူးကွ´
သူ့အမေ ရင်ကျိုးအောင် ...
မိဘနှစ်ပါးက သမီးငယ်အား မြို့ကြီးသို့ သွား၍ အလုပ်လုပ်ရန် ခွင့်ပြုလိုက်၏။ သမီးငယ် ထွက်မသွားခင်မှာ မိခင်ကြီးက… ``သမီးအခန်းထဲကို သမီးချစ်သူ ခေါ်မလာပါဘူး´´ဆိုတဲ့ ကတိတစ်ခုတော့ ပေးစေချင်တယ် သမီးရယ်ဟု ပြောပြီး ``အေး…သမီးအခန်းထဲကို သမီးချစ်သူကို ခေါ်လာတဲ့ဆိုတဲ့ သတင်းသာ မေမေကြားရရင် မေမေ ရင်ကျိုးမှာ အမှန်ပဲကွယ်´´ ဟု လည်း စိုးရိမ်ပူပန်စိတ်ကို လှစ်ပြလိုက်ပါသေးသည်။
သမီးငယ် ထွက်သွားပြီး ရက်သတ္တပတ် အနည်းငယ် အကြာမှာ သားအမိ ဖုန်းပြောဖြစ် ကြ၏။
``သမီးချစ်သူကို သမီးအခန်းထဲ ခေါ်မလာဘူးနော်။ ဟုတ်တယ် မဟုတ်လား သမီးလေး´´
``အို..ခေါ်မလာပါဘူး မေမေရဲ့။ မေမေ အတန်တန် မှာထားတဲ့ကိစ္စပဲ၊သမီး သူ့အခန်းကိုပဲ သွားပါတယ်။ သူ့အမေ ရင်ကျိုးပါစေနော် မေမေရယ်´´
Posted by zawmaung ရေးသားချိန် 1:54 AM No comments:
ကိုက် နေလိုက်ကြတာများဗျာ ....
ဧပြီလ ၁၇ ရက် စနေနေ့ သန်းခေါင်ကျော်အချိန်လောက်က ဧရာဝတီမြစ်ဆုံမှာ
ရေကာတာလုပ်ငန်းတည်ဆောက်နေတဲ့အေရှားဝေါလ်ကုမ္ပဏီ အဆောက်အဦးဝင်း အတွင်းမှာ
အင်အားအတန်အသင့်ပြင်းထန်သော ဗုံး ၃ လုံးဆက်တိုက်ဆိုသလို
ပေါက်ကွဲခဲ့တဲ့အတွက် ညဆိုင်း တာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ ၀န်ထမ်း ၄ ဦး နေရာမှာ
လူ၂၀ ထက်မနည်း ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ ကုမ္ပဏီ မှ အရာရှိတဦးက ပြောပြခဲ့ပါတယ် ..
မြစ်ကြီးနားမြို့အထက်ဖက် ၁၈ မိုင်အကွာမှာ တည်ရှိတဲ့ ကျိန်ခရမ် -
လုံခါဇွပ်ဒေသ မှာတည်ရှိတဲ့ ကုမ္ပဏီ ၀င်းအတွင်းမှာ ဖြစ်ခဲ့တာမို့
ဒဏ်ရာရသူဦးရေ အသေးစိတ်ကိုတော့ အတိအကျမသိရသေးပါဘူး .. ခန့်မှန်းခြေ ၂၀
ထက်မနည်း ဒဏ်ရာပြင်းထန်ပါတယ် .. ဗုံးအားပြင်းတာကြောင့် အဆောက်အဦးနဲ့
ယာဉ်ယန္တယား တွေအတော် ပျက်စီးသွားတယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ် ..
မပေါက်ကွဲသေးပဲ ကျန်နေတဲ့ ချိန်ကိုက်ဗုံးတွေကိုလည်း ကုမ္ပဏီအတွင်းနဲ့
ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တော်တော် များများ အချိန်မီ သိမ်းဆည်းရနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်း
အခင်းဖြစ်ပွားရာ နေရာကို မြောက်ပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှုး
ဗိုလ်ချုပ်စိုးဝင်းသွားရောက်ခဲ့ပြီး ချက်ချင်းလုံခြုံရေးတွေ ထူထူ ထပ်ထပ်
ချထားလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ် ..
မြစ်ဆုံရေကာတာကို မကျေနပ်တဲ့ ကချင်ပြည်သုတွေများသလို တခြား
ပြသနာတွေလည်းရှိပုံရပါတယ် .. အေရှားဝေါလ်မှာ လုပ်နေတဲ့ ကာယလုပ်သားတွေသာ
ဒေသခံတွေ အများစုပါဝင်ကြပေမယ့် ကြီးကြပ်ရေးအဆင့်ကနေ အရာရှိပိုင်းတွေက
ရန်ကုန်မန္တလေး စတဲ့ မြို့ကြီးတွေက ဖြစ်တာကြောင့် အဲဒီမှာ တာဝန်ကျနေတဲ့
ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေရဲ့မိသားစုတွေ က စိုးရိမ်စိတ်တွေများနေကြတယ်လို့ သိရပါတယ်
.. လောလောဆယ် သတင်းလေး တခုအနေနဲ့ တင်ပေးတာပါ ..
Posted by zawmaung ရေးသားချိန် 12:38 AM2comments:
ရိုက်တာ သတင်းဌာနက လူ ၂၄ဦးထက်မနဲ သေဆုံးတယ်လို့ဆိုပါတယ်..
နောက်ဆုံးရ ခိုင်မာတဲ့ သတင်းရပ်ကွက်က လူ ၃၀ ခန့် သေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဖြစ်ပွားချိန်မှာ သေတာ ဆယ်ဦး လောက် ဖြစ်တယ်။ အနီးအနားမှာ ရှိနေတယ့် အရာရှိကြီး တစ်ဦးလည်း ဗုံးထိမှန်တယ်လို့ သိရပါတယ်..
မြန်မာ့အသံက ယောင်္ကျားတစ်ယောက် အမျိုးသမီး သုံးယောက် သေပြီး လူ ကိုးဆယ်ဦး ဒဏ်ရာရတယ်လို့ ကြေညာပါတယ်.
ကျွန်တော် ဘာမှမပြောတတ်တော့ပါ.. ဝမ်းနည်းစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်..
သွေးသံရဲရဲ ပုံတွေတော့ မဖေါ်ပြတော့ပါ...။
Posted by zawmaung ရေးသားချိန် 3:52 AM2comments:
အင်း... သင်္ကြန်တွင်းမှာတော့ ဘာမှလဲမရေးနိုင် ပေါက်ကျိုင်းတို့ရဲ့ မြန်မာနှစ်ကူးသင်္ကြန်ကို နတ်စိမ်းတွေလို အငွေ့ကိုသာ စားနေရသလိုပါဘဲ .. အဝေးရောက်နေတော့ကာ .. စိတ်ကူးနဲ့ ပျော် စိတ်ကူးနဲ့ မြူး စိတ်ကူးနဲ့ ရူး စိတ်ကူးနဲ့ မူးနေရတာ.. ကဲ ပေါက်ကျိုင်းတို့ ရွှေမြန်မာပြည်ကြီးကို သူ့ရဲ့အတွေးအမြင် အပြလေး...
Posted by zawmaung ရေးသားချိန် 5:21 AM 1 comment:
ကဲမယ် .. ဟဲမယ် .. ဆွဲမယ် .. လဲမယ် .. ကွဲမယ် ..ပြဲမယ် ..အေ့ ..
ချစ်ကိုမိုး ၊ ဘီဘီစည် ၊ အိုက်ခိလောက် နဲ့ မယ်လိုဒီပေါက်ကျိုင်း တို့ကိုများ စောင်းဆိုထားလားမသိ ဒီကောင် ဟဲလေး. .စင်ပေါ်က ဆင်းမှ သူ့ပါးစပ် ကတော့ခံပြီး စီစီ သုံးဂျားလောက် သွတ်လိုက်ဦးမယ်..သူ့ အယား သစ်သစ်လေး နဲ့ နောင်ဂျိန်ပလေးရအောင်..
ဒီဒီလေး ရဲ့ ဒီနားတိုးပါဟဲ့ .. ဟိုမှာ အမူးကောင် အိုက်ခိလောက် မျက်လုံးကြီးက တဝဲဝဲနဲ့ ... ဒီဒီ့နောက်က ထောက်လှန်းရေး လုပ်နေတာ အဒူတုန်း .. လာကွဲ့လာကွဲ့ .. ပေါက်ကျိုင်း ရှေ့ကို..
အိုက်ခိလောက် ရေ.. လုပ်ပါဦးဟ.. အချမ်းပြေလေး..
ဒီမှာ.. ပေါကလဲပေါနဲ့.. ရေသန့် တက်တောင် ပေါ သေး.. အဟေးဟေး..
Posted by zawmaung ရေးသားချိန် 6:03 AM2comments:
ပန်းတိုင် သို့ နည်းလမ်းအသွယ်သွယ်ဖြင့်..
အခုတလော မှာ အငြင်းအခုံဖြစ်နေရတဲ့ ကိစ္စတစ်ခုကတော့ ဒီနှစ်ထဲမှာ ကျင်းပမယ်လို့ ကြေညာထားတဲ့ လွှတ်တော် ရွေးကောက်ပွဲကို အဓိကအတိုက်အခံအင်အားစုကြီးဖြစ်တဲ့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အနေနဲ့ ဝင်ရောက်ယျဉ်ပြိုင်မှာ မဟုတ်တဲ့အကြောင်း ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ အပေါ်မှာ မှားတယ်မှန်တယ် ဝေဖန်တာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်.. အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ အဓိကအကြောင်းပြချက်ကတော့ နိုင်ငံရေးပါတီများ မှတ်ပုံတင်ခြင်း ဥပဒေဘဲဖြစ်ပါတယ်.. ဒီ ဥပဒေ ပြဌန်းချက်များဟာ တရားမျှတမူ့မရှိတဲ့ အတွက် ပါတီအဖြစ် မှတ်ပုံမတင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ကျေညာချက်မှာဆိုပါတယ်..။
အခုလိုကြေညာတာနဲ့ ပတ်သက်လို့ သုံးသပ်သူအချို့က အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဟာ ဦးနောက်နဲ့မဆုံးဖြတ်ဘဲ နှလုံးသားနဲ့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်.. အချို့ကလဲ အစိုးရရဲ့ ထောင်ချောက်ထဲ ကို တည့်တည့်တိုးဝင်သွားတာဖြစ်တယ် .. အချို့ကလဲ ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး ပိုမိုခက်ခဲစေတယ် စသဖြင့် အမျိုးမျိုးဝေဖန် ပြောဆို ရေးသား နေကြပါတယ်..။
ပကတိအတိုင်း သုံးသပ်ရရင် အဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ ဗဟိုဦးစီးဝင်များဟာ သူတို့ပါတီရဲ့ ရပ်တည်မူ အနေအထား ပါတီခေါင်းဆောင် ဒေါ်စုကြည် ရဲ့ သဘောထား ပါတီဝင်များရဲ့ သဘောထားကို ကြားနာပြီး ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်လို့ လေးစားထိုက်တယ်လို့ ဆိုရမှာပါ ..၊ ဒီလိုဖြစ်ရပ်မျိုး မှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာ မရှိပါဘူး.. ၊ ဒီမိုကရေစီသဘောအရ ကြည့်ရရင် အယူအဆခြင်းမတိုက်ဆိုင်တဲ့ အတွက် ကန့်လန့်မလိုက်ဘဲ လက်ရှောင်ပေးလိုက်တာကို ချီးမွမ်းသင့်ပါတယ်..၊ ရွေးကောက်ပွဲဝင်လိုတဲ့ ပါတီဝင်များ အနေနဲ့လဲ အဖွဲ့ချုပ်ကို ထောက်ခံသူများ ထံမှ မဲရရှိဖို့ အခွင့်အရေးတရပ် ဖြစ်တာမို့ တရားတဖြင့်ကျိုးစားသင့်ပါတယ်..
အဖွဲ့ချုပ်ကို ထောက်ခံသူများအနေနဲ့လဲ NLD မပါရင် လမ်းဆုံးပါပြီ လို့ စိတ်မလျှော့သင့်ပါဘူး .. NLD ဟာ နိုင်ငံရေး အတွေ့အကြုံရှိပြီးဖြစ်တာမို့ သူ့နည်းသူ့ဟန်နဲ့ ဆက်လက်ရပ်တည်ဖို့ ကြိုးပမ်းပါလိမ့်မယ်....။
ဒီနေရာမှာ အလျဉ်းသင့်လို့ စာပေနိုဗယ်ဆုရ ဂျာမန် စာရေးဆရာကြီး ဟာမန်ဟက်စ် ရဲ့ သိဒ္ဓတ္တ ဆိုတဲ့ ဝတ္ထုထဲက စာပိုဒ်အချို့ကို ပြန်ပြီးသတိရမိပါတယ်.. ၊ စိတ်ကူးသက်သက် ဝတ္ထု ဖြစ်တဲ့ အတွက် ဗုဒ္ဓဝင်ကြောင်းနဲ့ ကိုက်ညီမှာ မဟုတ်ပါဘူး ...၊ ဝထ္တုထဲမှာ သိဒ္ဓတ္တ နဲ့ ကောဏ္ဍည တို့ဟာ ငယ်သူငယ်ချင်းများဖြစ်ကြပါတယ် .. ၊ သူငယ်ချင်းနှစ်ယောက် အမြိုက်တရားကို ရှာဖွေရင်း တစ်နေ့မှာ ဒေသစာရီ လှည့်လည်လာတဲ့ ဂေါတမဗုဒ္ဓ နဲ့ တိုးပါသတဲ့ ..၊ အဲဒီမှာ ကောဏ္ဍည တစ်ယောက် ရဟန်းခံပြီး ဗုဒ္ဓ ရဲ့ နောက်လိုက် ဖြစ်သွားပါတယ်..၊သိဒ္ဓတ္တ နဲ့ ဗုဒ္ဓတို့ တွေ့ဆုံခန်းက စိတ်ဝင်စား စရာကောင်းပါတယ်..၊ ဗုဒ္ဓ က သူဟာ သံသရာမှ လွတ်ကြောင်းတရားကို ဟောကြားသူဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်..၊ ။
သူ့သူငယ်ချင်း ရဟန်းပြုသွားတာကို စိတ်မကောင်းတဲ့ သိဒ္ဓတ္ထ က တော့
“ အမြိုက်တရား ရဖို့ အတွက် မကျင့်ကြံဘဲ ရဟန်းပြုပြီး ဗုဒ္ဓတရားတွေနာ ၊ ဗုဒ္ဓကိုကြည်ညို ၊ ဗုဒ္ဓနောက်က လိုက်နေရခြင်းကို ဂုဏ်ယူနေမယ်ဆိုရင် တရားရနိုင်ပါ့မလား ”
လို့ စောဒက တက်ပါတယ် ..၊
“ ဟုတ်ပါပြီ .. ယခု ရဟန်းဝတ်သူများ လူထွက်ပြီး ကာမရာဂတွေ လွှမ်းခြုံနေတဲ့ လောကထဲ ပြန်သွားကြရင် ကော သူတို့အတွက် ပိုကောင်းလာပါ့မလား ”
လို့ ပြန်လှန်မေးခွန်းထုတ် လိုက်ပါတယ် ...၊ သိဒ္ဓတ္တ က..
“ ဒီလိုဆိုတော့လဲ ဟုတ်ပါတယ် အရှင် ” လို့ တလေးတစားလျှောက်ထားပြီး တစ်ကိုယ်တည်း တရားရှာဖို့ ဆက်လက် ထွက်ခဲ့ပါသတဲ့ ...၊ ဝတ္ထုကြောင်းအရ သိဒ္ဓတ္တ နဲ့ ကောဏ္ဍည တို့ နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာပြီး ဇရာထောင်းနေတဲ့အခါ ပြန်လည်တွေ့ဆုံကြပါသေးတယ်.. ဘယ်သူ တရားရသလဲ ဆိုတဲ့ ဇတ်သိမ်းခန်းကို သိလိုရင်တော့ ဝတ္ထုကို ရှာဖတ်ကြည့်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းပါရစေ..။
ဒီနေရာမှာ သင်ခန်းစာ ထုတ်ချင်တာကတော့ ... လောက မှာ အမှန်တရား လို့ မဆိုနိုင်ပေမဲ့ အမှားဖြစ်နေတာမျိုး မဟုတ်တဲ့ အရာတွေလဲ ရှိနိုင်တယ်... ဆိုတာဘဲ ဖြစ်ပါတယ်..၊ တစ်နည်းမဟုတ် အခြားတစ်နည်းနဲ့ ကြိုးစားနိုင်ကြပါတယ်.. ၊ ဟိုလိုမှန်တယ် ဒီလိုမှားတယ် အပြန်အလှန် အပြစ်ဖို့နေကြမဲ့ အစား ကိုယ်ကျရာ နေရာကနေ ပန်းတိုင်ကို ရောက်လိုစိတ် မမှိတ်မသုန် ထားဖို့သာ ပဓာန ဖြစ်ကြောင်းပါ ခင်ဗျာ.... ၊။
“အင်း.. ဝေဖန် ၊ လေကန် ၊ လေကြောရှည် နေတာနဲ့ သဘက်ခါ သင်္ကြန်မှာ မယ်လိုဒီ လေးနဲ့ ချိန်းထားလို့ လက်လက်ထဒီဇိုင်းလေးတွေ ရွေးထားဦးမှ .. အန်းတိတ်ကြီးပေါက်ကျိုင်း ကြောင့် သူကလေး လူပုံအလယ် မျက်နှာမငယ် ရအောင် ပေါက်ကျိုင်း ဂေါင်း ကို ဗြူတီဆလွန်း မှာ ဖို့ထားညှပ်ထားဦးမှဘဲ .. အထုတ်အပိုးတွေ ပြင်ဆင်ပြီး လာပြီနော်.. လမ်းမှာနည်းနည်းကြာမယ်... နောက်ကျလို့ ဒီဒီလေး ကောက်နဲ့နော် သိလား.. ”
Posted by zawmaung ရေးသားချိန် 12:06 AM 1 comment:
ဘာရယ်ဟုတ်ဖူး.. အပျင်းပြေ ...
ရှိမဲ့စုမဲ့ ငွေလေးတွေ စုပြီး တပါးတိုင်းပြည် မှာ ငွေရှာနေကျတဲ့ ကိုကိုရွှေ များ .....
ဥ လုဖက်တွေ .....
နဖူးစာ တဲ့ ဗျာ...
အဆိုရှင်လေး “ အရိုး ” ဆိုထားပြီး .. ကိုလူထွေး အတွေးနဲ့ လုပ်ထားတဲ့ သီချင်းလေးတွေပါ ..။
ဒီအဆိုရှင်လေး အရိုး ဟာ .. သူများနဲ့မတူ တမူခွဲခြားလို့ သူ့သီချင်းလေးတွေ က ပေါက်ကျိုင်း ရင်ထဲ ဟတ် ထိတယ်ပေါ့ဗျာ.. ရယ်လဲ ရယ်ရတယ်..
အင်း.. ပေါက်ကျိုင်း မလဲ မနက်ဖန်ကျရင် စာလေးတွေ အဆုံးသတ်ဦးမှ .. ခါနာ တစ်လုပ်အတွက် လက်ရောခြေရော မနားတမ်းလှုပ်ရှားနေရတော့ .. အရင်ကလို ဟိုအိမ် ဒီအိမ် ကို လတ်ယားလတ်ယား နဲ့ လျှောက်လည် မစားရအညှော်ခံ ဆိုသလို ဧည့်ခံထားတဲ့ ဘာညာသာရကာ စားစရာလေးတွေ သွားရည်တမျှားမျှားနဲ့ ကြည့် ( ပြောရင်းဆိုရင်း ဗိုက်ကဆာလာပြီ .. ဂလု ) ဆီပုံး မှာ လက်ဆော့ မလုပ်နိုင်တာ တော်တော်ကြာပြီ ဆိုတော့ ကိုယ့်ကိုကိုယ် အရမ်းအရမ်း သနားမိပြီး အရည်လေး တစ်တောက်တောက် တောင်ကျချင်လာပြီ ... အဟင့်.. ရျွှတ် .. ဖတ်.. ၊။
Posted by zawmaung ရေးသားချိန် 3:44 AM No comments:
မသန်စွမ်း ပေမဲ့ သိမ်ငယ်စိတ်မဝင် လောကကြီးကို အရှံးမပေးဘဲ မာန်တင်းကြိုးစား အောင်မြင်လာတဲ့ သူ့ရဲ့ အနုပညာ အလှအက လေးတွေ မြင်တွေ့ ရတော့ ပေါက်ကျိုင်းတစ်ယောက် ကြည်နူး ဝမ်းသာမိပါတယ် ...
သူ့လို ဘဝတူ များ ဘဝကို ရဲရဲရင့်ရင့် အားမာန် မလျှော့ဘဲ.. ထာဝရ လျှောက်လှမ်းနိုင်ပါစေ ခင်ဗျာ..
Posted by zawmaung ရေးသားချိန် 3:12 AM2comments:
အူတူတူ လဒူပေါက်ကျိုင်းတစ်ယောက် သွားပါများခရီးမရောက် ဘဲ ဖိနပ် ပေါက်လို့ ရွှေပြည်ကြီး ကို ထော့နင်းထော့နင်းနဲ့ ပြန်လာချိ်န်တုန်းကပါ… ဝေလေလေပေါက်ကျိုင်း ထီးထမ်းလမ်းလျှောက် နေချိန်တွင်းမှာ ရွှေပြည်ကြီး ဟာ တိုးတက်မြင့်မားသွားတာ အံ့သြတကြီးဖြစ်လို့ခင်ဗျ..
မီး ကလေးပျက်တာ ခြင်ကလေး ကိုက်တာ ကလွဲရင်ပေါ့လေ .. တောသားမြို့တက် သလို ပေါက်ကျိုင်းတစ်ကောင် ခေါက်ထီးလေး လက်မောင်းကြားညှပ် ပူအိုက်လွန်းလို့ ပုဆိုးလေး အနားနှစ်ဖက် မကာမကာ ဖွားဖက်တော်ကို လေသလပ်ခံပေးရင်း နဲ့ ဟိုနား ဆိုလဲ ဝင်းငေးလိုက် ဒီနား ဆိုလဲ ဝင်မော့လိုက် ( လမ်းကြိုလမ်းကြား ဘီအီး တင်းကုတ်လေးတွေ ကလဲ မှိုပေါက်သလို ပေါ သကိုး ) အမျိုးများတဲ့ ပေါက်ကျိုင်း တစ်အိမ်တက်ဆင်း အပင်းတက်အောင်မျိုဆို့ အဖေရှိတဲ့ တပ်မတော်ဆေးသက္ကသိုလ် ကို အဝတ်ကလေး လျှော်ပေးသလိုလို အခန်းသန့်ရှင်းရေး လုပ်ပေးသလိုလိုနဲ့ မုန့်ဖိုးတောင်း .. ပြီး ပေါက်ကျိုင်း ငယ်ပေါင်း သနပ်ခါးအောင်ဆွေ နဲ့ ပဲပုပ်မ ဆီ သုံးလေးရက်တစ်ခါ ညအိပ်ပြီး ဒီလင်မယား နှောင်ဂျိန်ပလေး ရအောင် အချွန်နဲ့ မြောက်ထိုးပင့်ကော် သွားလုပ် နဲ့ အလုပ်အကိုင်မရှိ တစ်ရာ့ကိုးတစ်ရာ့တစ်ဆယ် ပေါက်ကျိုင်း အားအားယားယား တဝေထိုးနေတဲ့ အချိန်ပေါ့ ခင်ဗျား…။
တစ်နေ့တော့ ပေါက်ကျိုင်း ဒီနေ့ သနပ်ခါးနဲ့ပဲပုပ် ဆီ ဓါတ်စာ ကျ သဟ ဆိုပြီး ဂန္ဒာရီ လှည့် ပါလေရော.. သနပ်ခါးတို့ရဲ့အိမ်က အခု ရန်ကုန်မှာ ထိပ်ထိပ်ကျဲ ဈေးကြီးလှတဲ့ လူကုံတန် ရပ်ကွက်တစ်ခုမှာပါ.. ရှမ်းပြည်က လက်နက်စွန့် ရာဇာကြီး တစ်ဦး ရဲ့ လူယုံကြီး သနပ်ခါး အဖို့ အမ်ဒီ ကြီး အဖြစ်နဲ့ ဒီလိုနေရာမှာ နေရတယ်ဆိုတော့ မဆန်းဘူးပေါ့ခင်ဗျ.. ထီးထမ်းလမ်းလမ်းလျှောက်ပေါက်ကျိုင်း မဟုတ်တော့တဲ့ ထီးချိုင်းကြားညှပ် ပေါက်ကျိုင်းတစ်ကောင် သူတို့အိမ်ကို ဘယ်လောက်များ ဝင်ထွက် သွားလာ မျိုဆို့ နေသလဲ ဆိုရင် အိမ်ခြံဝ ဘဲလ် လေးနှိပ်လိုက်လို့ ပေါက်ကျိုင်း ကို မြင်လိုက်ရုံနဲ့ဘဲ ပဲပုပ်အချစ်တော် အယ်ဇေးရှင်း ခွေးကြီးနှစ်ကောင် ဂျက်ကီချမ်း နဲ့ မော်လီ တို့ နားရွက်တစ်ထောင်ထောင် အမြှီးတစန်နှံ့နှံ့ နဲ့ လွှားကနဲလွှားကနဲ ပြေးခုန်တက် ပါးလျှက်နားလျှက် လုပ်တော့တာ အဲဒီလို ပေါက်ကျိုင်း..။
သနပ်ခါး ပဲပုပ် တို့များ ပေါက်ကျိုင်း လာပြီဆိုရင် နားရင်းရိုက်ကလိထိုးနဲ့ ဝမ်းသာအားရ ကြိုမြဲ ..အမြဲတမ်းခွက်ပြောင်နေတဲ့ ပေါက်ကျိုင်းကိုတွေ့ရင် ငယ်ဘဝကို သတိရ အသက်တစ်ဝက် နုပျိုသွားတယ် ဆိုလား သူတို့ပြောပြောနေတဲ့ စကားပါ .. အရည်လေး ပဲပုပ် မသိအောင် ခိုးခိုး ကစ်နေရတဲ့ သနပ်ခါး တစ်ယောက်
ပေါက်ကျိုင်း လာပြီများ ဆိုရင် တပည့်တွေကန်တော့ထားတဲ့ အရက်ပုလင်း ကို အူယားဖာယား ဖွင့် ပဲပုပ်မ ကို အမြည်းလုပ်ခိုင်း နဲ့ ပေါက်ကျိုင်းမျက်စိကိုနောက်ရော..တစ်ညတာ မျိုဆို့ခွင့် ပါမစ် ရသွားပြီကိုး.. အမယ် သူကတောင် နှာခေါင်းတစ်ရှုံ့ရှုံ့ နဲ့ ပဲပုပ်မ ကြားအောင် ပြောသေး သဗျား...
“ မင်း လာလို့သာ ဒါတွေနဲ့ ဧည့်ခံ ရတာ ငါ့မလဲ ဘုရားတရား ဖက် စိတ်ပါသွားတော့ တယ်လဲ သောက်ချင်စိတ် မရှိပါဘူး မောင်ရာ… ဂလု ”
အဲဒီလို .. ဒါပေမဲ့ ငယ်ငယ်ကထဲ က တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် အူမချေးခါး ပါ မကျန် သိနေတဲ့ ပဲပုပ် ကတော့ အမြည်းတိုတိုထွာထွာ လေး လာချပေးရင်းနဲ့ သနပ်ခါး ကို မျက်စောင်း တစ်ထိုးထိုး..။
ဒီလိုနဲ့ ပေါက်ကျိုင်းတို့ တောင်ကြီးမှာလို ဧည့်ခန်း ကြမ်းပြင်မှာ ပုလင်းအမြည်း ချ တင်ပျဉ်ခွေ ကျကျနန ချိတ်ပြီး အောက်စက်ထဲ ပေါက်ကျိုင်းလာရင်ထဲ့နေကျ တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင် မီးပုံးပျံ ပြိုင်ပွဲ မှတ်တမ်းခွေလေး ကြည့်ရင်း အရက်ကလေး မော့လိုက် အမြည်းလေး ဝါး လိုက်နဲ့ ဇရက်မင်းစည်းစိမ် ကနေ ပုလင်းတစ်ဝက်လဲ ကျိုးရော ခွေးမင်းစည်းစိမ် ဖြစ်လာရော ဆိုပါတော့ … အဲဒီမှာ သနပ်ခါး ငယ်ငယ် ကလို သောက်ရူးသွေး စလာပါပြီ ...
ပေါက်ကျိုင်းတို့ တောင်ကြီးတန်ဆောင်တိုင် မီးပုံးပျံ ပြိုင်ပွဲ တွေမှာဆို ရင် မရှိမဖြစ် မပါမဖြစ် ဓနုအိုးစည်ဝိုင်း ကို ပြိုင်ပွဲဝင်တဲ့ အဖွဲ့တိုင်း ပါ ပါတယ်ခင်ဗျ.. ဒီ အိုးစည်ဝိုင်း က တစ်ချိန်းချိန်းတီးတဲ့ နောင်ဗိန်နောင်း အသံကြားရင် ပေါက်ကျိုင်းတို့ တောင်ကြီးသားတွေ စိတ်ထဲ ဖျဉ်းကနဲ မရိုးမရွ ဖြစ်လာပြီး ဓါးသိုင်းလက်သိုင်း အလှအပတွေနဲ့ စည်းချက်နဲ့ ကပါရောခင်ဗျ..။
တောင်ကြီးသွေးအပြည့်ပါတဲ့ သောက်ရူးသနပ်ခါး .. ဒီခွေထဲက တစ်ချိန်းချိန်းထုနေတဲ့ အိုးစည်သံလဲကြားရော မပြောမဆို ထတဲ့ပြီး ဗလငါးတန်ပြည့်စုံတဲ့ အရိုးခြောက် ဒီကောင် ပုဆိုးခါးတောင်းမြှောင်အောင်ကျိုက် .. ရေချိုးခန်းထဲက သဘက်ကြီး ခေါင်းမှာ ဖိုးယို့ဖားယား ပေါင်းပြီး အမူးသမားချေးပုံရှောင် သိုင်းကွက်တွေနဲ့ ကိုးယို့ကားယား ကပါလေရောဗျား..
ငမြောက်ကြီးပေါက်ကျိုင်း ကတော့ အောက်မှာ တင်ပျဉ်ခွေကို အကျအနချိတ် ကောင်းလှချည်လား အကွက်လေးတွေက… နောက်ဂျွမ်းလေး ထိုးလိုက်ပါဦး ဖေ့သားလေးရဲ့ .. ရှေ့ဂျွမ်းလေးလဲ လုပ်ပါဦးဟဲ့ နဲ့ တဟီးဟီးတဟားဟား အားပေးလိုက်တာ .. နားကလော မျက်စိနောက်တယ် ထင်ပ .. ပဲပုပ် အော် မှဘဲ ဒီ မ.. ရ .. က သနပ်ခါး ဂီလာန သိုင်းအက ကို ရပ်တော်မူ ပါတယ်..။
“ တဟီးဟီးတဟားဟား နဲ့ နင်တို့ ဘယ်လိုဖြစ်နေတာလဲ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကလေးတွေများ မှတ်နေလား ”
“ ဒီကောင် ပြောင်ကြီး သိုင်းကွက်တွေ မေ့တေ့တေ့ ဖြစ်နေပြီ ပြောလို့ ပြနေတာပါ ပဲပုပ် ရဲ့ အဟီး ”
“ ဘာပြတာလဲ ဘာပြတာလဲ ဟို ပြောင်ကြီးကလဲ မြှောက်ပေး .. နင်ကလဲ ဂွေးတက်အောင်က ဘုန်းကြီးရူးနဲ့လှေလူး သေချင်းဆိုးတွေ…”
“ ပဲပုပ် နော် ဒီကောင်အိမ်ကို တခါတလေ လာတုန်း မမေ့သေးတဲ့ အကွက်တွေ ထုတ်ပြနေရတာဟ နင်ကလဲ အဟီးဟီး ”
“ အရှက်ကိုမရှိ သူငယ်နာတောင်မစင်သေးဘူး ဒီအရွယ်ကြီးနဲ့ ”
“ ပဲပုပ်မ လွန်လာပြီနော် ငါ ဖြတ်ရိုက်လိုက်ရ နာတော့မယ် ”
“ အမယ် အမယ် ငါ့ကို ဘယ်တုန်းကများ ဒီလိုပြောဘူးလို့လဲ ပြောင်ကြီးရှေ့မှာ မရှိတဲ့ ပါဝါ ပြမနေနဲ့ လာလေ ထိရဲရင်ထိကြည့် ”
“ ဒီ မိန်းမ တော့ ကွာ ”
“ ဂုတ် ”
“ပဲပုပ် နင်ငါ့ကို ထုတယ် လက်ဝါးက အကြောင်းမရွေးဘူးနော် ”
“ ဂုတ်.. ဂုတ်… အောင်မယ်လေးဗျ ”
“ နင်ငါကို တကယ်လုပ်တယ် ငါကလဲ ..ဒီလို .. ”
“ ဂလောင်… အားလားလား.. ဆွဲပါဦးဟ..ပြောင်ကြီးရဲ့ သူ့ကို..အီးဟီးဟီး..”
ဂုတ် ဆိုတာက ပဲပုပ် လင်တော်မောင်သနပ်ခါးကို မယ်လမင်းပန်းကန်လုံးနဲ့ ထုလိုက်တဲ့ အသံပါ…ဂလောင် ဆိုတဲ့ အသံကတော့ အမြည်းသံပန်းကန်ပြားနဲ့ သနပ်ခါးနှဖူး ဖူးစာဆုံတဲ့ အသံပါ..၊ သူလက်ရွယ်တုန်းရှိသေး သွက်လိုက်သမှ တဂုတ်ဂုတ် နဲ့ ငယ်ငယ်ကလို ပဲပုပ်မ ပါဝါအပြည့်..၊ နောက်ဆုံးတော့ ထုံးစံအတိုင်း ဗလငါးတန်ပြည့်စုံတဲ့ အရိုးခြောက် သနပ်ခါး သာ အလံဖြူ ပြရသဗျား.. အကြောင်းသိ ပေါက်ကျိုင်း နဲ့ သူတို့ရဲ့ မျောက်လောင်းသားတော်မောင် ကတော့ သူတို့နှစ်ယောက်ကို ကြည့်ပြီး စပ်ဖြီးဖြီး… ဒီပွဲမှာ အလဲထိုးခံလိုက်ရလို့ ဒိုင်ပွဲရပ်သွားတောင်မှ ဒီကောင် သနပ်ခါး မကျေမချမ်းနဲ့ ပဲပုပ်နောက်ကွယ် ဘယ်လိုလုပ်လိုက်ရင် မကောင်းဘဲရှိရော့မယ်.. ဒီလိုလုပ်လိုက်ရင် ကျိုးကန်းကုန်တော့မယ်.. သနားလို့ လွတ်ပေးလိုက်တာ .. ဘာညာသာရကာ ပြောပြီး ပုဆိုးထဲကလက်သီးတပြင်ပြင်နဲ့…။
ပေါက်ကျိုင်းတို့တတွေ ရှေ့မှာထောင်ထားတဲ့ ပုလင်းလဲ ပြောင်သလင်းခါလို့ ပွဲသိမ်းပြီး ပေါက်ကျိုင်းအိပ်နေကျ အခန်းထဲမှာ မှိန်းနေတုန်း မောင်သနပ်ခါး ခေါင်းအုံးလေး ပိုက်ပြီး ဇီးရွက်လောက်ရှိတဲ့ မျက်နှာနဲ့ ရောက်လာပါရောလားဗျာ..
“ ဟေ့ကောင် သနပ်ခါး ဘာလာလုပ်တာလဲ ”
“ ပဲပုပ်က မောင်းချလို့ ဒီမှာအိပ်မလို့ ”
“ ကလေးသုံးယောက်တောင် ပေါက်ပြီးနေပြီ ဒီလောက် တုံးရ အရ ကြောက်ရ သလား သေချင်းဆိုးရဲ့ ကိုယ့်မိန်းမဘဲ ခပ်တည်တည်နဲ့ ဝင်အိပ်ပလိုက်ပေါ့ သွား ”
အဲဒါတောင် မသွားချင်သွားချင်နဲ့ ခေါင်းအုံးလေးပိုက်ပြီး ထွက်သွားပါရောခင်ဗျ.. ပေါက်ကျိုင်းမလဲ အရက်ကလေးတထွေထွေနဲ့ မှေးကနဲဖြစ်သွားတုန်း အအိပ်ဆတ်တဲ့ ပေါက်ကျိုင်း ကျောကတလှုပ်လှုပ်နဲ့ ဆိုတော့ကာ ငေါက်ကနဲ ထထိုင်ကြည့်လိုက်တော့ မ ရ က သနပ်ခါး ပေါက်ကျိုင်းနဘေးမှာ ကွေးကွေးလေးအိပ်နေတာ သနားစရာပင်ကောင်းသေးတော့ဗျာ..
“ သနပ်ခါး ထစမ်း ငါ ဆောင့်ကန်လိုက်ရ ဘာဖြစ်လို့ ပြန်လာအိပ်တာလဲ ”
“ ပဲပုပ် က သူ ဆီလာအိပ်ရင် အော် ပလိုက်မယ်လို့ပြောတယ် အဲဒါမို့ပါ သူငယ်ချင်း ရယ်....... ”
“ အော်ပစေပေါ့ကွ သူဖာသာသူ ခွန်နှစ်အ်ိမ်ဘဲကြားကြား အရပ်ရှစ်မျက်နာဘဲကြားကြား ကိုယ့်မိန်းမဘဲ အူကျအောင် အော်ချင်အော်ပစေ ”
“ အိပ်ရဘူး တော်ကြာ သူ့ဗလကြီးနဲ့ ငါ့ကို ”
“ မင့် သား အကြီးကောင် အခန်းထဲသွားအိပ်ပေါ့ ဒါမှမဟုတ်ရင် ဧည့်ခန်းထဲ သွား ”
“ အကြီးကောင် က ညညဆို သေးပေါက်ချ သဟ .. နှစ်တန်းရောက်နေပြီ အခုထိသောက်ကျင့်မပျောက်သေးဘူး .. ဧည့်ခန်းထဲမှာ လဲ အိပ်ချင်ဘူးကွ မနက်မနက်ကို ငါ့တပည့်လင်မယား ဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့ ရှက်စရာကြီး ”
ပေါက်ကျိုင်းမလဲ နှစ်ယောက်ကလဲ မအိပ်တတ် ဒီကောင်မယားကြောက်ကို စိတ်ကလဲတို နဲ့ သူမျက်နာကို စေ့စေ့စိုက်ကြည့်ပြီး…
“ အေး .. ပဲပုပ်မ အော်မှာကြောက်လို့ ဒီမှာလာအိပ်တယ် .. ဒီည ပဲပုပ်မ မအော်ဘဲနဲ့ မင်း မချိမဆန့် အော် ရလိမ့်မယ်.. ငါ တောထဲတောင်ထဲမှာ ငတ်ပြတ်လာတဲ့ကောင် သဘောပေါက်တယ်နော်.. ”
ဒီကောင် ပေါက်ကျိုင်းစကားဆုံးတော့ တွန့်ကနဲဖြစ်သွားပြီး အတင်းကုန်းရုံးထ ခေါင်းအုံးပိုက်ပြီး ပြူးပြူးပြာပြာ နဲ့ တချိုးထဲလစ်သွားလိုက်တာ ပေါက်ကျိုင်းမလဲ အေးအေးလူလူ အိပ်ရတော့တယ် ..အဟုတ်ဗျာ တကယ် သနပ်ခါး မိန်းမကြောက်လိုက်ပုံများ စိတ်ကိုလေသွားတယ်.. တကယ်…။
ညဉ့်နက်နက်မှ အိပ်ပျော်လို့ နေတော်တော်မြင့်မှ နိုးတော့ သနပ်ခါးတို့လင်မယား သားအကြီးကောင်ကျောင်းသွားဖို့ ပြင်ဆင်နေကြတာ ညတုန်းက အဖြစ်အပျက်တွေက သူတို့မဟုတ်သလို မဆိုင်သလို သူတို့စိတ်လိုလက်ရ ရှိရင် ခေါ်ခေါ်တတ်တဲ့ အောင် ရေ.. အီနော့ ရေ..နဲ့ ဖြစ်နေလိုက်ကြတာ နှစ်ယောက်လုံးကို နားရင်းပါးရင်း တွေ ကိုချည်းဘဲ ဖြတ်ရိုက်ချင်နေတော့တာ.. အဖေအမေတို့ ပေါက်ကျိုင်းသေပြီထင်လို့ ဆွမ်းသွတ်တဲ့ ညနေမှာ မွေးလို့ အိမ်နာမည် ပေါက်ကျိုင်း လို့ပေးထားတဲ့ သူတို့သား အကြီးကောင် ပညက်သွားရာ ဓါတ်သက်ပါ လို့လားမသိ .. ပေါက်ကျိုင်း လိုဘဲ ပြောင်စပ်စပ်နဲ့ ခင်ဗျ.. ။
ပေါက်ကျိုင်းတစ်ယောက် ဒီ ဂျူနီယာပေါက်ကျိုင်းပြောင်စပ်စပ်မျက်နှာကို တစ်ိမ့်စိမ့်ကြည့်ပြီး ဒီလင်မယား ကို စချင်တာနဲ့
“ မင်း သားအကြီးကောင်က ငါနဲ့တူသဟ… မျက်နှာက ပြောင်စပ်စပ်နဲ့ .. ”
“ ဟုတ်တယ်.. ပြောင်ကြီး မင်းနဲ့တူတာမှ သောက်ခွက်ကော သောက်ကျင့်ကော ညည အိပ်ရာထဲမှာ သေးပေါက်ချတာ ကော အတူတူကွာ.. ချွတ်စွတ် ”
“ ဟုတ်လား အ ဟဲ ဟဲ … တူမှာပေါ့ ပဲပုပ် အတွက် ဟိုး တောထဲတောင်ထဲကနေ ငါ “ ပါဆယ် ” ပို့ပေးလိုက်တာကိုး ကွာလတီအပြည့် နဲ့ အ ဟေး ဟေး.. ”
သနပ်ခါးတို့ လင်မယား ပေါက်ကျိုင်းရဲ့ စကားဆန်း ပါဆယ် ဆိုတာကို ဇဝေဇဝါအူကြောင်ကြား စဉ်းစားရင်း တဖြည်းဖြည်း အဓိပ္ပယ် ပေါက်လာပြီထင့် လောက်စာလုံး ထုံးတို့မျက်နှာ ရွှံ့တွလာပြီး “ ဘာ ဘာ သေချင်းဆိုးပြောင်ကြီး မိုက်ရိုင်းလိုက်တာ.. ဟေ့ ပဲပုပ် . နင့်ကို ဒီကောင် မိုက်ရိုင်းတာ .. ရိုင်းအုံးဟာ.. ရိုင်းအုံး ..” နပန်းထလုံးပြီး ပေါက်ကျိုင်း ဇက်ပိုး ကို ဖိတွယ်တော့ ပေါက်ကျိုင်းမျက်စိထဲ ကြယ်တွေလတွေ ရောင်စုံခလို့ … ပဲပုပ် ကတော့ စိတ်မဆိုး တဲ့အပြင် ပေါက်ကျိုင်းတို့ နှစ်ကောင် နပန်းထသတ်နေတာကို ကြည့်ပြီး ဗိုက်နှိပ်ပြီး ရယ်နေလိုက်တာ မျက်ရည်တွေတောင် ထွက်လို့ဗျား…။
သူငယ်ချင်းတို့ မင်းတို့ကို သတိရမိတိုင်း ဒီလို ပေါက်ကတရ စာတွေဘဲ ရေးရေးမိနေတတ်တယ်..
တနေ့မှာ တို့တတွေ ပြန်ဆုံကြတာပေါ့ကွာ .. မင်းတို့ရဲ့ သံယောဇဉ် တင်းတင်း အိမ်ထောင် သက် ငွေရတု ရွှေရတု မှသည် စိန်ရတု ပတ္တမြားရတု တိုင်အောင် ခိုင်ခိုင်မြဲမြဲ လျှောက်လှမ်းလက်တွဲ နိုင်ပါစေလို့
ငါ ဇော်မောင်မောင် ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ကွာ ...
တစ်နေ့တော့ ပြန်ဆုံကြတာပေါ့ ....။
Posted by zawmaung ရေးသားချိန် 12:26 AM5comments:
စစ်ကြီး ပြီးရင် သား ပြန်လာမယ် အမေ ...
စစ်ကြီး ပြီးဆုံးတဲ့ အခါမှာ
ကောင်လေး ပေါင်မုန့်ယူရန် ပြေးထွက်လာတယ်
တိတ်ဆိတ် ငြိမ်သက် လျှက်ပါ..
ဒီလို ငြိမ်သက် နေမှာပါ...
ကံတရား ကို စီမံသွားပါလိမ့်မယ်..
ဟိုး ... အမြင့်က..
ကြယ်တာရာ တွေ တိတ်ဆိတ်နေတဲ့ အချိန်မှာ
တစ်စုံတယောက်ရဲ့ အသံက တိုးတိုးလေး ထွက်ပါတယ်...
သား.. အိမ်ပြန်လာမယ် အမေ
ကျွန်တော် အသက်ရှင်လျှက် ပြန်လာမယ်..
စစ်ကြီး ပြီးသွားတဲ့ အခါမှာ..
ကျွန်တော်တို့ ရဲဘော်ရဲဘက်တွေ ဒါဏ်ရာတွေကို ဆေးကုကြမယ်..
အသစ်ပြန်လည် ဖွံဖြိုးလာတဲ့ နိုင်ငံလေး ဟာ
အင်အား တောင့်တင်း လာလိမ့်မယ်
တကယ့်ကို အရေးပါတဲ့ ဘဝလေး တစ်ခုလဲ
ကိုယ့်ဘဝကို လွတ်လပ်စွာ ရပ်တည်နိုင်တော့မှာပါ..
အမေ ကျွန်တော် အိမ်ကိုပြန်လာခဲ့မယ်..
အသက်ရှင်လျှက် နဲ့ ပြန်လာမယ်..
စစ်ကြီး ပြီးဆုံးသွားတဲ့ အခါ
ရန်သူကို ခွင့်လွတ်နိုင်ဖို့က တစ်ခုထဲသော ခံယူချက်ကတော့
အကြင်နာ တရား ဘဲ..
ဒါဟာ အားလုံးအတွက် အမြင့်မြတ်ဆုံးအရာပါဘဲ
ဒီကမ္ဘာလေး မှာ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ
အကြင်နာတရား ကင်းမဲ့ ခဲ့ရတယ်..
ကျွန်တော်တို့ တတွေဟာ ရန်သူတွေ မဟုတ်ကြပါဘူး
ဘုရားသခင်က ကျွန်တော်တို့ အားလုံးကို ခွင့်လွတ်ပါတယ်..
သား အသက်ရှင်လျှက်နဲ့ ပြန်လာမယ် အမေ
စစ်ကြီး ပြီးသွားတဲ့ အခါ ..
စစ်ကြီး ပြီးဆုံးသွားတဲ့ အခါမှာ... .... ။
မြန်မာ့သူငယ်ချင်းများ မှ ကူးယူ ဖေါ်ပြပါသည်..။
Posted by zawmaung ရေးသားချိန် 12:13 AM3comments:
If the hero never comes to you, if you need someone you’re feeling blue, if you wait for love and youalone, if you call your friends nobody’s home, you can run always, but you can’t hide, through the storm and through the lonely night, then I’ll show you, there’sadestiny the best things in life, they're all free.
*But if you wanna cry, cry on my shoulder, if you need someone who cares for you. If your feeling sad, your heart get colder. Yes, I’ll show you what real love can do.
If your sky is grey, Oh let me know, there’saplace in heaven where we’ll go, if heaven isamillion years away, Oh just call me and I’ll make your day, when the nights are getting cold and blue, when the days are getting hard for you. I’ll always stay here by your side, I promise you. I’ll never hide.
*But if you wanna cry, cry on my shoulder, if you need someone who cares for you, if your feeling sad, your heart get colder. Yes, I’ll show you what real love can do.
What real love cans do? 2
What love cans do? 2
ပေါက်ကျိုင်း ဟတ်ထိအောင် ပစ်တတ်တဲ့ ချစ်ကိုကြီး စိုင်းလင်းတိုင်း ရေ .. သူ နဲ့ ကျွန်တော် မာနတွေကိုယ်စီ နဲ့ အခု အချိန်မှာ တံတိုင်းကြီးခြား နေပေမဲ့ အဖေါ်သစ်မရှာဘဲ တစ်ကိုယ်ထဲ ဒီသီချင်းလေးကို အထပ်ထပ် အခါခါ ဆိုမိပါတယ်..
သေချာပါတယ်.. သူလဲ အခုချိန်မှာ ဒီသီချင်းလေးကို ညည်းနေမယ် ဆိုတာ...
Posted by zawmaung ရေးသားချိန် 12:49 AM 1 comment:
ကဲမယ် .. ဟဲမယ် .. ဆွဲမယ် .. လဲမယ် .. ကွဲမယ် ..ပြဲမ...
လူငယ်ထု အတွင်းမှာ ရေပန်းစားနေတဲ့ နတ်ဒေ၀ီလေး (သို့)...